2011-01-09 ~ Myanmar Express
စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်နှင့် ပက်သတ်ပြီး လူငယ်များ ဆွေးနွေးကြ
စစ်မှုမထမ်းမနေရ အကြောင်း ပြန်ဌာန်း ထွက်ပေါ်လာကြောင်းကို NHK သတင်းဌာန မှ ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှာပင် ပြည်ပ နိုင်ငံ အသီးသီးသို့ရောက်ရှိနေသော မြန်မာလူငယ်အချို့ ဤအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။89 people like this.ဟမ်း လော့ Myanmar to introduce mandatory military serviceMyanmar's military government will introduceadraft for men and women aged 18 and older.NHK has obtained official documents issued by Myanmar's military government. The documents show that leg...islation for mandatory military service was enacted on December 17th.Men aged between 18 and 45, and women aged between 18 and 35 will be drafted into the army for two to three years.The government requires all people of eligible age, except the physically challenged, to register with local authorities.Those who fail to register or try to evade the draft face imprisonment of up to five years.08 January at 22:03 · LikeUnlike ·3peopleZay Ar ဟုတ်ပမလားကိုယ်လူရယ် လူတိုင်းတပ်ထဲအ၀င်ခံပမှာလား08 January at 22:09 · LikeUnlike · 1 personဟမ်း လော့ Zay Ar >>မည်သူတွေကကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်မည်သူတွေကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဆိုင်းငံ့လုပ်ခွင့်ရမယ် ဆိုတာဥပဒေထဲမှာအတိအလင်းရေးဆွဲထားပြီးသားပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပဒေဆိုတာလည်းနိုင်ငံတကာကဒီမိုကရေစီ...နိုင်ငံတိုင်းမှာ ယခုလက်ရှိလိုက်နာကျင့်သုံးရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အတူတူပါပဲ....08 January at 22:19 · LikeUnlike ·3peopleTr KoKo မိန်းကလေးတွေတော့ မပါစေချင်ဘူး။ မိန်းကလေးတွေကို ဆေးဘက်မှာလောက်ပဲ သုံးစရာရှိတယ်။ ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ သုံးမယ်ဆိုရင် အုပ်ချုပ် မှုကိစ္စတွေ ရှုပ်လာနိုင်တယ်။08 January at 22:43 · LikeUnlike · 1 personThar Gyi Tr KoKo ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်။ တကယ်လို့ အမျိုးသမီးတွေပါရင်လည်း နောက်တန်း အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်းမှာပဲ သုံးသင့်တယ်။ ကောင်းပကွာ ဒီသတင်းကြားရတာ။ လက်တွေ့ကို သူတို့တွေ လက်ခံရတော့မယ်။ ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတာ။ အွန်လိုင်းမဟုတ်ဘူး။ မြေပြင်မှာ တွေ့ရတော့မယ် ။08 January at 22:46 · LikeUnlike ·3peopleLwin Mar Soe ဘာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အစိတ်အပိုင်း မှ မဟုတ်ဘူး...compulsory military service ဆိုတဲ့ စစ်မှု. မထမ်းမနေရစနစ်ကို ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးတဲ့ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ သုံးတာ မဟုတ်ပါဘူး..လျောက်ပြောနေတယ်...ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ. ဘာမှ မဆိုင်ဘူး....ခုလို လုပ်ပေးမယ်ဆိုလဲ တမျိုးကောင်းတာပဲ..အားလုံး လက်နက် သုံးတတ်သွားတာပေါ့......အေးရော09 January at 01:43 · LikeUnlike ·4peopleKo Oo ၀မ်းသာစရာပါပဲ ယောက်ျားတိုင်းအတွက်တော့ သတင်းကောင်းလေး တစ်ခုပါပဲ09 January at 02:17 · LikeUnlike ·6peopleဂျိုကုပ် ကြီး လာရဲတဲ့ဘိုချုပ်သာလာခဲ့ ၊ သင်တန်းဆင်းပွဲတိုင်းကို သွေးချောင်းစီးသွားစေရမည် ။09 January at 04:51 · LikeUnlike ·2peopleEi Khin Khin မိန်းမ တွေကို စစ် ထဲ ၀င် မခံချင်တဲ့ မဟာ ယောက်ျားကြီးဝါဒ များ Democracy မှာ Discrimination မရှိဘူး၊ Gender Discrimination က မမျှတ ဆုံးဖြစ်တယ် လို့ ပြောလာကြတာတွေကို လည်း လေ့လာကြပါအုံး၊ ကမ္ဘာမှာ အမျိုးသမီး စစ်သေနာ ပတိ တောင် ရှိနေပြီ၊ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ စစ်သားတွေ အလေးပြုတာ ခံနေတဲ့ မိန်းမတွေ ရှိနေပြီ ဆိုတာ လည်း သတိထားကြပါအုံး။09 January at 04:53 · LikeUnlike ·3peopleဂျိုကုပ် ကြီး တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို မင်းတို့သွေးနဲ့ ပြန်ပြီးဆေးကျောပြစ်ရမည် ။ လက်နက်တပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါ ။09 January at 04:53 · LikeUnlike ·2peopleစိတ် ထား သန့်စင် မဆဲကြပါနဲ့ဗျ..အပေါ်မှာ မိန်းကလေး လာကွန်းမန့်သွား တယ်လေဗျာ... သူဖတ်မိမှာပေါ့... မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းတွေမဆဲကြပါနဲ့..ကိုဂျိုကုပ်....09 January at 04:57 · LikeUnlike · 1 personSlip Knot ‎@ Ei Khin KhinDemocracy မှာ Discrimination မရှိဘူး ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ Gender Discrimination က မမျှတ ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို တော့ သတိပြုပါ။ အထူးသဖြင့် တပ်မတော်တွင်းမှာ ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ တန်းတူညီတူ မခွဲခြားပဲ အမျိုးသား စစ်...သားတွေ နည်းတူ အမျိုးသမီးစစ်သမီးတွေကို ( တန်းတူမခွဲခြားပဲ အမျိုးသား တစ်ဝက်၊ အမျိုးသမီး တစ်ဝက် ) ရှေ့တန်းလွှတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို စခန်းထိုင်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်ကို သတိမထားပဲ သူတပါးကို လေ့လာခိုင်းတာကတော့ မ Ei Khin Khin အနေနဲ့ ဥာဏ်တိမ် လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင် အရင် ဦးနှောက်သုံးပြီး စဉ်းစားပါ။ အသိဥာဏ်ကွန့်မြူးပါ။ အမျိုးသားမှ အမျိုးသမီးမှမဟုတ်ပါဘူး အရည်အချင်းရှိတဲ့စစ်သည် ဆိုရင် တပ်မတော်သားအားလုံးက အလေးပြုကြပါလိမ့်မယ်။ လက်တလောမှာလဲ အလေးပြုခံနေတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့် အမျိုးသမီးများစွာ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ စစ်သားတွေ အလေးပြု ခံခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး အကြောင်းကို တကယ်သိတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးလိုပဲ တပ်မတော်ထဲကို ဝင်ပြီး တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်လောက် မြန်မာ့တပ်မတော်မှာရှိရင် လက်ညိုးထိုးပြပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ စစ်သေနာပတိ ခန့်လိုက်ပါ့မယ်။ မ Ei Khin Khin အနေနဲ့လည်း Gender Discrimination မရှိပဲ တပ်မတော်ထဲကို ရာသက်ပန် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်တယ် ဆိုရင် ကြိုဆိုပါတယ်။ တကယ် လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမရှိရင်တော့ ဝင်မပြောတာ အကောင်းဆုံးပဲ။@ ဂျိုကုပ် ကြီးသိမ်ဖျင်းပြီး တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ စကားတွေ တန်းစီ ရေးမယ့်အစား လွှတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာက အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။စစ်ထဲတောင် မဝင်ရသေးပဲ၊ သေနတ်တောင် ခုထိမကိုင်ဘူးသူအနေနဲ့ စစ်သက်အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ကျော်ရှိတဲ့ တပ်မတော် အရာရှိတွေကို စစ်ရေးအရ စိန်ခေါ်တာတော့ ဟာသ မြောက်လွန်းပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တပ်ထဲဝင်နေချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာ အဲ့ဒီလူတွေကို အလေးပြုရလိမ့်မယ် ဆိုတာကိုတော့ သိထားပါ။ နောက်တစ်ခုက အခြေခံ စစ်သင်တန်း တစ်ခုမှာ သေနတ်အစစ်၊ ကျည်အစစ်တွေကို ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးမယ်....၊ အခြေခံ စစ်သင်တန်းတစ်ခုရဲ့ သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်က လာဆင်းပေးလိမ့်မယ်...လို့ မျှော်လင့်နေတာတော့ သနားဖို့တောင် ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်နက်ကိုင်ပြီး သွေးချောင်းစီးအောင် လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်း တစ်ဦးအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် နာမည်နဲ့ facebook လေး သုံးရင်တော့ ဒီထက်ပို အဆင့်တန်းရှိပြီး ကြည့်ကောင်းမှာသေချာပါတယ်။09 January at 05:33 · LikeUnlike · 20 peopleစိတ် ထား သန့်စင် Gender Discrimination ကို မမျှမတမဖြစ်စေဖို့ ခုခေတ်ကြီးမှာ အမျိုးသမီးဘက်က နေရပ်တည်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်...တပ်မတော်ထဲကိုဝင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့နေရာမှာ Gender Discrimination မရှိဘဲ ကိုSlip Knot ပြောသလို(အမျိုးသား စစ်သားတွေ နည်းတူ... အမျိုးသမီးစစ်သမီးတွေကို တန်းတူမခွဲခြားပဲ အမျိုးသား တစ်ဝက်၊ အမျိုးသမီး တစ်ဝက် ) ရှေ့တန်းလွှတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို စခန်းထိုင်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး)။....ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့် အမျိုးသမီးများစွာ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ ရှိနေပါတယ် ဆိုတာကတော့ ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ကိုပဲမေးကြည့်ပါ..ကျွန်တော့်ကတော့အလေးပြုခဲ့ရဖူးပါတယ်..ထိပ်ဆုံးကိုရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေကိုပဲကြည့်မနေပါနဲ့...ထိပ်ဆုံးရောက်ဖို့သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေဘာတွေကွဲခြားမှုရှိလဲဆိုတာဆန်းစစ်ကြပါအုံး.....:)09 January at 05:46 · LikeUnlike ·2peopleကို ဖြိုး ဒီအစီအစဉ်ကတော့ တကယ်ကိုကောင်းတယ်ကွ....အမျိုသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးလို့ ခေါင်းစဉ်ရှိနေပေမဲ့အမျိုးသားတွေက အမှန်တော့အဲ့လောက်အညင်းမပွားကြဘူးကွ တပ်မတော်ကိုသာ ကိုချင်းမစာပဲနဲ့တပ်မတော်ကိုကြည့်ဝိုင်းပြောနေတာ.......ခုတော့တစ်နိုင်ငံလုံးတပ်မ...တော်သားတွေ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ အရမ်းကိုကောင်းသွားပြီပေါ့.......ဒါမှငါတို့ နိုင်ငံကိုလဲ ဘယ်နိုင်ငံကမှ09 January at 11:50 · LikeUnlike ·4peopleSupyae Sandar Wall ပေါ်ကို link လေး လာ share သွားလို့ ဘာများလဲလို့.....ဆောက်ဖြစ်မှကျောင်းဒကာ ကိစ္စလေးဖြစ်နေတာကိုး...မုန့်ဆီကြော် ဘယ်နေမှန်းမသိ နှူတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါ့မလား လုပ်နေကြသေးတယ်....ဂယ်သာဆိုရင်လဲ မိုက်တာပဲကွာ.............ဂိမ်းထဲမှာပဲ တိုက်နေခိုက်နေရတာ...ဂိမ်းထဲက လက်စွမ်းတွေ စကေးတွေကိုအပြင်မှာ လက်တွေ့ပြလို့ရတော့မှာဆိုတော့ ကြိုက်တယ်ကွာ......mandatory military service in Myanmar ကတော့...* So Called * mandatory military service ဖြစ်လာအုံးမှာပါပဲ...အဟက် အဟက် ...makes the country stronger လား ... it trains criminals လား ဆိုတာကတော့ .... မျှော် မျှော် မျှော် ပေါ့ ဗျာ.............09 January at 12:02 · LikeUnlike ·7peopleSupyae Sandar ဆောက်ဖြစ်မှ ကျောင်းဒကာပါဗျာ...အဟဲ အဟဲ ..Armed Service ကို အရင် train ကြပါစေအုံး...Conscription ကို သိကြပါစေအုံး...Laws in mandatory military service ကို အရင်ဆုံး Format ချကြပါစေအုံးNew ways တွေ create & cun လုပ်ကြပါစေအုံး......ဆက်ပြောရင် ကျန်သေးတယ် အများကြီး... အခုဟာတွေပြင်ဆင်မှာနဲ့တင် သေချာပါတယ်.....ကျွန်းပင် စီမံကိန်းပေါ့...ဆိုလိုချင်တာက နှစ်ရှည်စီမံကိန်းပေါ့.... သက္ကရာဇ် စီမံကိန်းပေါ့..အဟီးး09 January at 12:11 · LikeUnlike ·5peopleYumyum Noodle အဲဒီ. အစီအစဉ်ကို ကြိုက်တယ် . . တိုင်းသူပြည်သားထဲက လူငယ်တွေ ၊ လူလတ်တွေ အကုန်စစ်ထဲရောက်ပြီး သေနက်ကိုင်ရတော့မှာ ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဲလိုဝင်ရတဲ့နေ့ အရမ်းဝမ်းသာမှာဗျ ။ ဗိုလ်ကြီးကို အရင်ဟဒ်ရှော့ပစ်ရမယ် အဟဲ . . . ( ရန်သူဘက်က ဗိုလ်ကြီးကိုပြောတာနော် ) good luck . . generals ! . . . ;) . .09 January at 12:29 · LikeUnlike ·6peopleHtoo Wai နှစ်ရှည်စီမံကိန်းဆိုပဲညီမလေးရေ...ဘယ်သူကနှစ်ရှည်တာတုန်း....ဆောက်ဖြစ်မှကျောင်းဒကာဆိုတော့ လဲ ဆောက်ဖြစ်မှကျောင်ဒကာပေါ့ ..ဒါပေမယ့်ညီမလေးကိုးကွယ်နေတဲ့ လူတွေကတော့ ကျောင်းမဆောက်ပဲ ဒကာ ဒကာမဖြစ်ချင်နေတာလေ....ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးညီမလေးရဲ့ တရားဟော...ကောင်းရုံနဲ့ သမ္မတလုပ်လို့ ရရင် လူတိုင်းဘိတ်သိတ်ဆရာဖြစ်ကုန်လိမ့် မယ်...တပ်မတော်ဆိုတာ အစီအစဉ်တကျပဲလုပ်တယ် လမ်းလျှောက်ရင်တောင် ဘယ်ညာနင်းပြီး အစုအစည်းနဲ့ လျှောက်တာ ...ညီမလေးပြောတဲ့ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှလဲမသိဘူးညီမလဲမသိဘူး အနိုင်ရချင်လို့ စကားနိုင်ဝင်မလုရဘူး ညီမမသိရင်မသိသလိုနေ မပြီးခင်မြန်မာမမြင်စေနဲ့ တဲ့ ..ခု မပြီးခင်မြန်မာမြင်တော့ ..မဟုတ်တန်းတရားကစပြောတယ်အပေါ်မှာ ညီမတို့ ဘက်တော်သားကိုဂျိုကုပ်ကိုပဲကြည့် ခွေးရူးလိုပဲ တွေ့ ကရာလိုက်ကိုက်နေတာအဲဒီလိုလက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ ဒေါ်လာရရင်ကို့ နိုင်ငံကျွန်ဇတ်သွင်းဖို့ ဝန်မလေး နိုင်ငံသိက္ခာကို ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ ၀က်ဝက်ကွဲအောင်နှပြားမတန်အောင် ချပြ မြန်မာပြည်သူတွေ ငတ်နေလို့ မြန်မာပြည်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ပေးပါလို့ ပြောတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွဲပြီးတော့ တပ်မတော်ကို နှဖူးလာမတောက်နဲ့ လက်ကျိုးသွားမယ်...ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးရင်ထိုင်နေလို က် အပေါ်ကညီမတစ်ယောက်ပြောသလို ညီမလေးအမျိုးသမီးစစ်သေနာပတိချုပ်သော်လည်းကောင်းအမျိုးသမီးသမ္မတသော်လည်းကောင်းဖြစ်ရင်တော့ အလေးပြုလိုက်မယ်အကိုတို့ ကတော့ စစ်တပ်ထဲစ၀င်ကတည်းက နိုင်ငံတော်အလံကိုင်ပြီးသစ္စာဆိုထားတာ...ဘယ်တော့ မှသစ္စာမဖောက်တက်ဘူးအဲလိုမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူတက်တက်ငါမတက်ရလို့ ဆိုပြီး ဘေးကနေကဂျီကဂျောင်မလုပ်နဲ့ အကြည် တော်ဝတ္ထုလိုမျိုးပဲ အဲဒါကို ကလေးအတွေးလို့ ခေါ်တယ်....09 January at 12:31 · LikeUnlike ·6peopleTr KoKo ၁။ မိန်းကလေးတွေ မပါစေချင်ဘူးဆိုတာ မိန်းကလေးတွေကို နှိမ့်ချ အထင်သေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာမှာမိန်းကလေးစာမသင်ရလို့ မရှိပါဘူး။ မိန်းကလေးမို့လို့ ဘာစီးပွားရေးမလုပ်ရဘူး၊ ဘယ်ရာထူးထက်မကြီးရဘူးလို့လဲ ကန့်သတ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ယောက်ျား၊မိန်းမ မခွဲခြား...ရေးဆိုတာ ပညာသင်ကြားရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း စတဲ့နေရာတွေမှာပဲ ထားသင့်တာပါ။ အခုအကြောင်းအရာက စစ်ထဲဝင်ရမယ့်ဥပဒေပါ။ အများစုက ဝင်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာမှာမိန်းမတက္ကစီမောင်းသမ၊ ဘတ်စ်ကားမောင်းသမတို့ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ ဘယ်သူမှခွဲခြားမထားသလို တားလဲတားမထားပါဘူး။ ခေတ်ကာလ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မူတည်ပြီး မရှိတာပါ။ အဲဒီလိုပဲ တပ်မတော်ထဲကို မိန်းကလေးတွေ အများကြီးဝင်လာရင် မသင့်တော်ဘူး။ ဘယ်လိုမသင့်တော်လဲ၊ ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စရှုပ်နိုင်လဲ ဆိုတာ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေ နားလည်ပါတယ်။ အခု Comment ဝင်ပေးနေတာလဲ သူတို့ကိုဦးတည်ပြီး ဝင်ပေးနေတာ။ စပိန်က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကို သွားမမြင်ပါနဲ့။ ဝန်ကြီးအဆင့်ဆိုတာ အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာရုံးထိုင်၊ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး အလေးပြုခံတာပါ။ သူက ဦးနှောက်နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ရတာ။ အာဖဂန်ရောက် အမေရိကန်စစ်သမီးတွေ ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မှုရှုပ်လဲ၊ ဘာပြဿနာတွေကြုံနေရသလဲ လေ့လာကြည့်ပါ။ ကြိုသတိပေးရရင် မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ အမေရိကန်တပ်မတော်လောက် ထောက်ပံ့မပေးနိုင်ပါ။________________________________________________________၂။ လက်နက်သုံးတတ်သွားတာပေါ့တို့၊ လက်နက်တပ်ဆင်ပေးလို့ ကျေးဇူးဆိုတဲ့ လူတွေအတွက် ဘယ်တော့ထွက်မယ် မသိတဲ့ဥပဒေကို စောင့်မနေကြပါနဲ့။ ကိုယ့်အကြံအစည်တွေနောက်မကျရလေအောင် အခုပဲ ပြည်တော်ပြန်ပြီး နီးစပ်ရာတပ်တွေကိုသာ ပြေးဝင်လိုက်ကြပါ။09 January at 12:33 · LikeUnlike ·7peopleSupyae Sandar ခစ်ခစ်...ရယ်ရတယ်...ကိုမောင်ရန်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်ရှင်..စောစောစီးစီး ရယ်နေရလို့...link ကို wall ပေါ်မှာ လာရှယ်ယာသွားတဲ့အတွက်လေ...အဓိက ကျတဲ့ မဟာဗျူဟာကြီးကိုပဲ အရင် Fantacy World ထဲမှာcreate လုပ်ပါစေအုံး...ကျန်တာတွေကို တော့ နောက်မှ.....ရောက်ရား ..မီးစင်ကြည့် ကပါစေအုံး..Society နဲ့ Mandatory Military service ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးBalance လုပ်ပါစေအုံး... Pros & cons တွေဆိုတာက ဒုတိယ ဦးစားပေးလေသဘောသိကြရဲ့လားမသိ..1. patriotism and educational standards ကို raise လုပ်ဖို့ဆိုတာ..2. physically and mentally agree ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ...3.strong nation အတွက် ရည်ရွယ်မယ်ဆိုတာ....4.armed Service ရဲ့ pros & cons တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ....အိုးးးးးးးးးးးးးး ဆက်ပြောရင် comment နေလို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး..ဟိုသီချင်းလေးပဲ ဆိုပြချင်တော့တယ်..♫ ♫ လေထဲ လွင့်ပါသွား..လေထဲလွင့်ပါသွား ♫ ♫အော် ..နောက်တစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်...♫ ♫ တို့နှစ်ယောက်အတူ လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောက်ဖူးခဲ့ကြတာပဲ ♫ ♫ဒီပရောဂျက်နဲ့ ဒီပရောဆက် ... အရာထင်စေသော်.......ဒန် ဒန် ဒန်09 January at 12:48 · LikeUnlike ·6peopleYumyum Noodle ☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈◈ ░█░░░█░█░▄▀░█▀▀░░░░▀█▀░█░█░█░▄▀▀░ ░█░░░█░█▀░░░█▀░░▄▄░░█░░█▀█░█░░▀▄░ ░█▄▄░█░█░▀▄░█▄▄░░░░░█░░█░█░█░▄▄▀░ ◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈ . . . ;)09 January at 12:57 · LikeUnlike ·3peopleTr KoKo ‎@Supyae Sandar: စဉ်းစားကြည့်တာနဲ့ ပြဿနာခေါင်းစဉ်တွေကို လူတိုင်းလိုလို အလွယ်သိနိုင်တယ်။ ပြဿနာကိုတော့ လူတိုင်းမရှင်းတတ်ဘူး။ ဒီဥပဒေထုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ စနစ်တွေ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာရှိတယ်။ နှစ်ပေါင်းများ...စွာ တပ်မတော်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ မင်းပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းမှာ လက်တွေ့အသုံးချလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံ ဘယ်လောက်ထိရှိခဲ့လဲ။ မင်းစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးတာလောက်နဲ့ ဒီလိုယတိပြတ်ပြောနိုင်ပါ့မလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလည်း ပြဿနာခေါင်းစဉ်တွေလောက်ပဲ မပြောပါနဲ့။ ဒီပြဿနာတွေ ဒီလိုရှိတယ်၊ ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့် ဒီပြဿနာတွေကို ရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး စသည်ဖြင့် အချက်ကျကျပြောပါ။ မင်းပြောနေတဲ့ ပြဿနာခေါင်းစဉ်တွေကို မင်းကိုယ်တိုင်ရောနားလည်ရဲ့လား။ နားလည်ရင် မြန်မာလိုပဲရှင်းပြပါ။09 January at 13:43 · LikeLwin Mar Soe ကောင်းတဲ့ဖက်က ကြည့်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လူတိုင်း စစ်ပညာကို တတ်ကျွမ်းသွားပြီး လိုအပ်တဲ့အခါ ပြန်သုံးနိုင်မယ်...နှစ်စဉ် စစ်သားမွေးထုတ်ပြီး ပေးနေရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ သက်သာသွားမယ်....တကယ့် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ချင်စိတ်ရှိပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်ကို မုန်းလို. မဝင်တဲ့သူတွေ အတွက်လဲ အခွင့်အရေးတရပ်ပါပဲ....09 January at 15:10 · LikeUnlike ·2peopleSlip Knot ‎@ Supyae Sandar"ဆောက်ဖြစ်မှ ကျောင်းဒကာ" ဆိုတဲ့ စကားထက် "ဆောက်ဖြစ်ရင် ပြဿနာ" ဆိုတဲ့ စကားက မ Supyae Sandar အတွက် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ခုပြောနေတဲ့ လူတွေက မုန့်ဆီကြော် ဘယ်နေမှန်းမသိတာကို နှုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သေချာပေါက်ေ...ရာက်လာမယ့် မုန့်ဆီကြော်ကို အခန့်သား ထိုင်စောင့်နေကြတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်တလော တပ်မတော် အကြောင်းပြောနေသူတွေက တပ်မတော် သားတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ မ Supyae Sandar အနေနဲ့ မုန့်ဆီကြော်ကို မသေချာဘူးထင်ပြီး လစ်လျှူရှုထားရင်တော့ အနားရောက်မှ နှုတ်ခမ်းတောင် မပါတဲ့ အိုးခြမ်းပဲ့နဲ့ တည့်ရပါလိမ့်မယ်။မ Supyae Sandar ဂိမ်းထဲမှာ စစ်တိုက်ရတာကို ဘဝ လို့ထင်နေပုံရတယ်။ ဂိမ်းထဲနဲ့ အပြင်နဲ့ ဘာကွာလဲ ဆိုတာကို စစ်တိုက်တဲ့ဂိမ်းမှ မဟုတ်ဘူး တခြား ဘယ်ဂိမ်းပဲ ဆော့ဆော့အသိသာကြီးပါ။ ဂိမ်းထဲမှာ စစ်တိုက်တာနဲ့ အပြင်မှာ စစ်တိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ ဆိုရင် နိုင်ငံတကာမှာ စစ်သင်တန်းတွေ ဖွင့်စရာတောင်မလိုပါဘူး။ ဂိမ်းသင်တန်းနဲ့ပဲ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း တွေ လုပ်နေကြပါလိမ့်မယ်။ သေနတ်ပစ်တာတောင် မဟုတ်ပါဘူး ဘောလုံးဂိမ်းကျွမ်းကျင်စွာ ကစားနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိရင် အရင် ဘောလုံး ဆင်းပြီး ကန်ခိုင်းကြည့်ပါအုံး။ သူတို့တွေ တကယ် ပျော်ပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကန်နိုင်ကြရဲ့လားဆိုတာကို....။"ဂိမ်းထဲက လက်စွမ်းတွေ စကေးတွေကို အပြင်မှာ လက်တွေ့ပြလို့ရတော့မှာဆိုတော့ ကြိုက်တယ်ကွာ.." လို့ ပြောတာကတော့ အတော်လေးကို ကလေးဆန်ပြီး ညံ့ဖျင်းတဲ့ အတွေးပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်ကို တွေးလိုက်တဲ့ အတွက်လည်း သိပ်ကို လေးစားမဆုံး ဖြစ်ရပါတယ်။09 January at 17:05 · LikeUnlike · 8 peopleSlip Knot ဒီ စီမံကိန်းကို ဘာအတွက်လုပ်တာလဲ ဆိုတာကိုတော့ တခြားလူတွေ ထင်ရာမြင်ရာ ပြောနိုင်ကြပေမယ့် တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့ ထင်ရာတစ်ခု ပြောရင်တောင် အတည်ဖြစ်သွားမှာမို့ ဘယ်သူမှ လေးနက်တဲ့ စကားလုံးတွေ မပြောပဲ အပေါ်ယံ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ဆွေးနွေးနေကြတာကို သတိပြုပါ...။Armed Service ကို အရင် မ train ပဲ၊ Conscription ကို မသိ ပဲ၊ Laws in mandatory military service ကို မပြင်ဆင်ပဲ၊ New ways တွေ မ create ပဲ ဒီစီမံကိန်းကို တပ်မတော်က ရေးဆွဲမယ်လို့ ထင်နေတာတော့ တပ်မတော်ကို လျှော့တွက်လွန်းတယ် ထင်တယ်။ မ Supyae Sandar အနေနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ ပေါ်လစီကို ခုထိ လျှော့တွက်နေတာလား?၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ပြီးအထင်ကြီးနေကြတုန်းလား? ဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ခက်တယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ စနစ်ကျမှု၊ ပိရိ သပ်ရပ်မှုနဲ့ စီမံကိန်းပေါ်လစီကို လျှော့မတွက်သင့်ကြောင်းနဲ့ အတိုက်အခံတို့ရဲ့ ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ အရည်အချင်းကို ခုလက်ရှိ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်နေတဲ့ အတိုက်အခံအားလုံးနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂ နှစ်က ဘာမှ မအောင်မြင်ခဲ့တာတွေက သက်သေပါပဲ။လက်ရှိအနေအထားမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးလောကကနေ စနစ်တကျ ဆုတ်ခွာနေတယ်။ တပ်မှုးကောင်းဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နေရာတစ်နေရာကနေ ချက်ချင်း ထွက်မပြေးဘူး။ စနစ်တကျစီစဉ်ပြီးမှ နဲနဲချင်း ဖယ်ပေးတယ်။ အရာအားလုံးကို ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၀ မှာ ဖြစ်မယ့် အစီစဉ်အားလုံးကို ၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက စီမံထားလို့ အဲ့ဒီချိန်မှာ မ Supyae Sandar တို့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဆိုတဲ့ အသင်းကြီး ပေါ်လာခဲ့တာကို သတိမူပါ။ တိကျ သေသပ်တဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ အကောင်ထည်ဖော်သွားပုံကို လေးစားပါ။ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် ဆိုတာကို သတိပြုပါ။ ဘာလုပ်လုပ် ဖြစ်နေတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ အရည်အချင်းကို မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဒီစနစ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ အရာရာတိုင်းကို နှစ်ရှည်စီမံကိန်းအဖြစ် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ရေးဆွဲထားပြီးသားပါ။ နောင်လာမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်လည်း plan ချပြီးသားပါ။ ခုချိန်မှာ မ Supyae Sandar သိရတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်းပင်စီမံကိန်း တစ်ခုက ကျွန်းတောကြီး တစ်ခုထဲက ကျွန်းပင်လေး တစ်ပင်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီ ကျွန်းပင်လေးရဲ့ သစ်ရွက်လှုပ်တာကို ဘယ် တပ်မတော်သားကမှ ရင်ခုန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သေချာတာကတော့ အဲ့ဒီ အပင်သေးလေးရဲ့ သစ်ကိုင်းတွေရဲ့ ရိုက်ခက်မှုဒဏ်ကိုတော့ တပ်မတော်သားတွေထက် မ Supyae Sandar က ပိုခံရမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီတော့ ရင်ခုန်မယ့်ခုံ... မ Supyae Sandar ကပဲ ရင်ခုန်ပါလိမ့်မယ်။ မ Supyae Sandar ပြောသလို "mandatory military service in Myanmar ဆိုတာက လေတိုက်လို့ သစ်ရွက်လေး လှူပ်နေသလိုပါပဲလေ.." ဆိုတာ ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ အချိန်က သက်သေပြသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီတစ်ကြိမ် ကျနော်နဲ့ ဆွေးနွေးချိန်မှာတော့ မ Supyae Sandar မရှောင်ပြေး တော့ဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပါစေ......09 January at 17:05 · LikeUnlike · 10 peopleBurma Demo army dog so dar uneducated kg tway army win pee khine dar loke nay tae kg tway ko say dar kwa .09 January at 17:06 · Likeစိတ် ထား သန့်စင် တခုပြောပါအုံးမယ်...ကျွန်တော့်ပရိုဖိုင်ကပုံကိုချိန်းပြီး ၀င်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး.. ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်သလောက် ကူးပြီး ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ပေါက်ကရလုပ်ပြီး တင်လို့ရပါတယ်. ..profile ကိုopenထားပါတယ် ကြိုက်သလောက် လာကူးယူနိုင်ပါကြောင်းးးး.....:)(မှတ်ချက်။တချ...ို့သေးသိမ်ညံ့ဖျင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ သူများပုံကိုမသိအောင်ယူ ပေါက်ကရဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ပြီးဝေဖန်တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့လူတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်)09 January at 17:38 · LikeUnlike ·2peopleSupyae Sandar အွန်.... နာမအားတုန်း တူဒို့ဒွေ အ၀ရေးထားလိုက်ကြတာ...အဟဲအားပြီဗျ...ဒါပေမယ့်..ခဏလေးထပ်စောင့်ကြအုံးဗျာ.....တစ်ခုခုစားလိုက်အုံးမယ်...ကိုဂလာဘားဂျီးကလဲ...ပဲဟင်းချက်နည်းတောင်...သင်ပေးအုံးမယ်ဆိုပဲ...ပြီးတော့ သူပဲ အားအားယားယားcomments ဘယ်နှစ်ခုရှိပြီလဲဆိုတာကို လိုက်ရေနေသေးတယ်..ကိုဂလာဘားဂျီး မပြောပါနဲ့ ...ကျွန်မတောင် ပုံကို ကြောက်လွန်းလို့ကျောခိုင်းနေတဲ့ ပုံပဲတင်ရဲတယ်..ရုရှားကအရာရှိတစ်ချိူ့ လက်စောင်းထက်လိုက်ပုံများ...တစ်ချိူ့နော်..တစ်ချိူ့ ..သိတယ်မလား ...ဟို Slip Knot ဆိုတဲ့ အကိုကလဲ..သူ့ကိုပဲ ရှောင်ပြေးရအုံးမယ်ရှိသေး...ဂိမ်းလောက်ပဲ သဘောထားတယ်ရှင်..ဒါကလဲ..ဂိမ်း ကစားပွဲတစ်ခုလိုပဲလှည့်ကွက်တွေနဲ့ ပတ်ရွှေ့နေတဲ့ ကိစ္စကြီးပဲလေ....အဟမ်း...အဟမ်း... တစ်ခု အလုပ်ပေးခဲ့မယ်ဗျာ...နော်..စီမံကိန်းတစ်ခုကို ဘယ်နှစ်နှစ် ဘယ်လောက်ကြာအောင်အချိန်ယူရပါတယ်ဆိုရင်..အဲ့စီမံကိန်းရဲ့  ဖြစ်စဉ်ကို မသိရရင်တောင်ဒီလိုအစီအစဉ် ရှိပါတယ်....ဘယ်လောက်လျာထားပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်နိုင်ငံတွင်း ပြည်သူတွေ သိမှရမှာလေ..သိသင့်တာပေါ့..အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့...အာရုံပြောင်းရုံလောက်...အရေးပေါ် လက်အပူပေးကြပ်ထုပ်ထိုးတဲ့ ပရောဂျက်လောက်နဲ့တော့..အများကြီး..အမြင့်ကြီးတွေစွပ်စွပ်ရွတ်ရွတ် မပြောကြပါနဲ့လေ....အစိုးရအသစ်တောင်မရွေးရသေးဘူး...ဇွတ် အလံပြောင်းတာ မဲ ပေးတဲ့ ကိစ္စအတွက် အာရုံပြောင်းတာကပုံစံကအဲ့လို..အခုလဲ ဒုတိယပင်လုံ ကို အာရုံပြောင်းချင်နေတော့..စစ်မှူမထမ်းမနေရ ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးက ပေါ်လာပြန်ရော...နဲနဲတော့များပြီ......Mandatory Military service က သူများနိုင်ငံမှာတော့military serviceaform of slavery မဖြစ်ဘူးလေ....ဒီကိစ္စက တစ်ကယ် ဖြစ်မဖြစ် confirm တောင်မဖြစ်သေးဘူး...တပ်မတော်တွင်းက RU ရောက် အရာရှိတွေက အခုတည်းကfacebook မှာ ဘာလုပ်ပစ်မယ်.ဘယ်လိုလုပ်ပစ်မယ်..တွေ့ကြတာပေါ့လို့..ကြိမ်းနေပုံမျိူးနဲ့ကတော့...သေချာတယ် ......Mandatory Military service in Myanmar ကတော့military serviceaform of slavery ဖြစ်မှာ ..ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပဲဗျိူ့....အဲ့တော့ အကိုတို့တွေ ကျွန်မ မုန့်စားနေတုန်း ..လုပ်ထားရမယ့်အလုပ်တစ်ခုက.... အဟမ်း...အဟမ်း....Mandatory Military service in Myanmar ကmilitary serviceaform of slavery ဖြစ်သွားနိုင် မနိုင်ပေါ့ရှင်... ဖြေထားကြနော်.... :)09 January at 18:32 · LikeUnlike ·4peopleSlip Knot ‎@ Supyae Sandarမ Supyae Sandar က ကျနော်ထင်ထားတာထက်ကို ပိုပြီး ဝေးလွန်းနေတော့ ဘယ်လို ပြန်ရှင်းပြန်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။"စီမံကိန်းတစ်ခုကို ဘယ်နှစ်နှစ် ဘယ်လောက်ကြာအောင် အချိန်ယူရပါတယ်ဆိုရင်..အဲ့စီမံကိန်းရဲ့  ဖြစ်စဉ်ကို မသိရရင်တောင် ဒီလို...အစီအစဉ် ရှိပါတယ်....ဘယ်လောက်လျာထားပါတယ်ဆိုတာကို ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်း ပြည်သူတွေ သိမှရမှာလေ..သိသင့်တာပေါ့.. "ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အစိုးရသစ်နဲ့ အလံအကြောင်းပြောထားတာတွေ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လေ့လာဖို့ အများကြီး လိုအပ်နေတယ် ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အခြား အကြောင်းအရာ မပြောပါနဲ့အုံး လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက် တောင် မသိတာ ညံ့ဖျင်းလွန်းပါတယ်။ လေ့လာဖတ်ရှုကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီ ၇ ချက်မှာ အမျိုးသားညီလာခံလုပ်ဖို့၊ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲဖို့၊ ဆန္ဒမဲ ကောက်ခံဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့နဲ့ အစိုးရသစ် ရွေးချယ်ဖို့ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ project ကို ပြည်သူအားလုံးကို ချပြခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာကတည်းကပါ။ ဒီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမဖုံးကွယ်ထားပါဘူး။ ခုမှ ကောက်ထည့်လိုက်တဲ့ အရေးပေါ် project လည်း တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ အစ ကတည်းက ဒီ ၇ ချက်ပါပဲ။ကျနော် တကယ်မသိလို့ မေးချင်တာ တစ်ခုက အစိုးရသစ် မရွေးခင် အလံမပြောင်းရဘူးလို့ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်ဥပဒေမှာ ပါလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒုတိယ ပင်လုံ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ?၊ အဲ့ဒီ project အတွက် ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ လုပ်နေကြပြီလဲ ? ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အောင်မြင်မှု ရနေပြီလဲ ? အဲ့ဒီ project ကို ဘယ် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေက ထောက်ခံပါသလဲ? ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ဘယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေက ထောက်ခံပါသလဲ? လူပေါင်း ဘယ်လောက်များများက စိတ်ဝင်စားနေပြီး အစိုးရကို ဘယ်လောက်များ ထိခိုက်နေပြီလဲ ? ပြောပြပေးပါ။ ဘယ်သူမှမထောက်ခံဘူး၊ ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားဘူး၊ ဘယ်လောက်မှလည်း မအောင်မြင်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ project အတွက် အာရုံပြောင်းဖို့ မလိုဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါ။ဒီစနစ် ပေါ်လာရင် ရုရှားရောက် တပ်မတော်အရာရှိတွေက ဘယ်သူပြည်သူ ဘယ်လိုညှင်းပမ်းမယ်၊ ဘယ်လို သတ်ဖြတ်မယ်လို့ ပြောထားတာ မတွေ့မိပါဘူး။ (ရှိရင် ပြပါအုံး)။ ဒါပေမယ့် အတိုက်အခံအချို့ကတော့ လက်နက်ကိုင်ရလို့ကောင်းတယ်၊ ဂိမ်းထဲက လက်စွမ်းတွေ အပြင်မှာ ပြရလို့ ကြိုက်တယ်၊ သင်တန်းဆင်းပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကို လုပ်ကြံမယ်၊ သွေးချောင်းဆီးစေရမယ် လို့ ပြောနေကြတာကိုတော့ မ Supyae Sandar တွေ့မှာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ပြောခဲ့တယ် ဆိုတာ09 January at 20:28 · LikeUnlike ·5peopleKyaw Gyi ကိုSlip Knotေ၇...Supyae Sandar .Supyae Sandar ..Supyae Sandar .ဆိုပီးသူ့ကိုဦတည်ပြောနေတာကို အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်နေတာ အဲလိုပြောအောင်လဲ လုပ်နေတာ တကယ်တော့ဘာဆိုဘာမှမသိရှာပါဘူး ပီးရင်ဖော်ဝှက်မေးလိုလို ဆိုဒ်တွေကနေလေ့လာပါသလိုလိုပြောပြီး ဂျောင်မှာဝင...်ခွေသွားတာ သူခံယူထားတာက စစ်တပ်အကြောင်း မကောင်းပြောဖို့နဲ့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မည်မျှဆိုးရွားနေသည်ကို ပြောတက်ဖို့ နဲ့၊ fb မှာရုရှားကအရာရှိတွေနဲ့ စကားပြောခွင့်ရအောင်နဲ့ ရု၇ှားစကားလုံးကိုဘဲတွေဆီကနေလေ့လာပီးတော့ ပြန်နွှာဖို့ကြိုးစာနေတာ အများကမြင်လိုက်ရင် သူပဲအကုန်သိ အကုန်တက်ရုရှားအကြောင်းလဲ အကုန်သိအဲလိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာ သူ့ကိုပြောရတာ ဟိုဟာကို ဟိုဟာကျွေးရတဲ့အတိုင်း အေးဆေးလွှတ်ထားလိုက်ပါ သူသိလားဆိုတော့မသိဘူး ဘာသိလဲဆိုတော့ ဒီလိုလိုက်အော်ဖို့သိတယ် အသက်ကြည့်လိုက်တော့ ငမြောက်ငချောက် သမိုင်းသိလားဆိုတော့ ရန်ကုန်က သမိုင်းကိုမေးတာလာ လုပ်ဦးမယ် စစ်တပ်အကြောင်းဘာသိလဲမေးတော့ ပဲတွေကျွေးတယ်လို့ပြောတာကြားဘူးတယ်လုပ်ဦးမယ် သူသိတာ ဒေါ်စုတို့ဈေးေ၇ာင်းတဲ့ ကျောက်ကျောဝယ်စားဖို့တော့ သိလောက်မယ်09 January at 21:00 · LikeKyunney Timofeeva Кто не служит в армии, тот не МУЖЧИНА!! :))) я бы служила в армии как Качин ;)09 January at 21:56 · LikeUnlike · 1 personစိတ် ထား သန့်စင် Kyunney Timofeeva >>>Мы солдаты..:)09 January at 22:19 · LikeKyunney Timofeeva Я рада за тебя, что ты солдат ) ну даже говоря Капитан ) офицер ;)) главное БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ) Живите долго >:D09 January at 22:24 · LikeUnlike · 1 personPromise Phyo comment ရေးတာကအစချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆုပြည့်လေးပဲခင်ဗျားတို့မလို့ ဒီလိုမိန်းကလေးကို ရန်ထောင်နေတာအံ့သြပါရဲ့ဗျာ...09 January at 22:26 · LikeUnlike · 1 personစိတ် ထား သန့်စင် Kyunney Timofeeva >>Большое спасибо вам.Я тоже желаю вам всего хорошего ..:)09 January at 22:36 · Likeဂွ တို ကောင်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်သလို ဆိုးတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပါပဲ။တပ်မတော်စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကတည်းက ခုကျင့်သုံးမယ့် စနစ်မျိုးက တစ်ခါမှမကျင့်သုံးသေးဘူး။ ဘာဖြစ်ဖြစ် research တစ်ခုအနေနဲ့တော့ result တခု ရလာနိုင်ပါတယ်။ ရှေးမြန်မာဘုရင်တွေခေတ်မှာလည်း ထောင်...ပြု၊ရာပြု၊ ဆယ်ပြု မြို့တွေကနေ လိုအပ်တဲ့ စစ်သည်အရေအတွက်ကိုဆင့်ခေါ်တဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သေးတာပဲလေ။ နောက်ပြီးတော့ စစ်တပ်အကြောင်းကို သေချာရေရာမသိသေးသူတွေ တပ်ထဲရောက်လာတဲ့အတွက် အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲစီမံခန့်ခွဲမှု တွေကို ပညာပေးလိုက်သလို ဖြစ်ပြီးတော့ လူထုအနေနဲ့ နားလည်သင့်သလောက် တော့ တပ်အကြောင်းကို နားလည်သွားကြမှာပါ။သူတစ်ပါးစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် နေနေရတဲ့ ဘဝတွေကို လူထု နားလည်လာရင်စစ်သားတိုင်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့တော့ ယုံကြည်တာပါပဲ။ ဆိုးကျိုးကတော့အရပ်ဖက်ကို ပြန်ရောက်သွားမယ့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေများလာပြီး လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်မလာပါဘူးလို့တော့ ဘယ်သူမှ ကံသေကံမ တပ်အပ်မပြောနိုင်ပါဘူး။09 January at 23:01 · LikeUnlike ·3peopleMg Yan စစ်မူ့ထမ်းဟောင်းတွေကနေ လက်နက်ကိုင်ပြီးတော်လှန်ဖို့ ဆိုတာကတော့ အခု မဝင်မနေရလို့ဆိုလာမယ့် တပ်မတော်ဥပဒေက ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်အခြေခံပြီး ဖြစ်လာမှာပါ... အဲ့တော့ မကျေနပ်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်လာရင်တောင်မှ အုပ်ချုပ်မူ့စနစ်တွေနားလည်ထားတဲ့ စစ်မူ့ထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ လမ်းပေါ်ထွက်အော်ဖို့ တောခိုသောင်းကျန်းဖို့ကတော် နည်းလာနိူင်မယ်ထင်ပါတယ်....09 January at 23:06 · LikeUnlike · 1 personSlip Knot ‎@ ဆြာ ဆိုက်စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကို မကျင့်သုံးချိန်တုန်းက စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကို မကျင့်သုံးဘူး ပြောခဲ့တာနဲ့၊ ခုချိန်မှာ ဒီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတာကို ဘာအတွက်ကြောင့် အံ့သြတာလဲ ဆိုတာ နားမလည်ပါဘူး။ မကျင့်သုံးချိန်မှာ မကျင့်သုံးဘူး လို့ပြောတာ က အထူးအဆန...်းမဟုတ်သလို အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ တန်းတူ လိုအပ်လို့ စတင်ကျင့်သုံးဖို့ အစီစဉ်ရေးဆွဲတာကလည်း အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ မဟုတ်တာလုပ်နေတာမှ မဟုတ်တာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်းနေတာကို အံ့သြနေတဲ့ ကို ဆြာ ဆိုက် ကို ကျနော်က အံ့သြမိတာ တော့ အမှန်ပဲ။@ ဘိန်းစား ဘွန်တောင်းမြို့ထဲနေနေ၊ တောထဲနေနေ အနည်းဆုံး ၂ နှစ် က နေ ၃ နှစ်ထိတော့ စစ်မှုထမ်းသင့်ပါတယ်။@ Promise Phyoဆုပြည့်လေး ဆိုသူကို ကျနော်တို့လည်း ကို Promise Phyo နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ချစ်ပါတယ်။ လွဲမှားတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေအတွက် အသိတရား ရစေဖို့ ရှင်းပြပေးနေတာပါ။ စာလုံး ၁၀၀ မှာ တစ်လုံးလောက် သိသွားတယ်ဆိုရင်ပဲ အချိန်ကုန်ရကျိုးနပ်ပါပြီ။တစ်ရေးနိုးမှ ကြံတဲ့ အကြံအစည်မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်ကို စပြီးတည်ထောင်စဉ်ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ ကို Promise Phyo အနေနဲ့ လေ့လာမှု နည်းလို့ မသိတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။@ Justin Wood စစ်အကြောင်း ဘာနကန်းတစ်လုံးမှ မသိတဲ့လူတွေကို အချိန်ပေးပြီး စစ်ပညာ ကို မလိုအပ်ပဲ သင်မပေးသလို၊ ရိက္ခာလည်း ထုတ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ အားလုံးက လိုအပ်လို့ စီစဉ်တာချည်းပါပဲ။ ဒီစနစ် ကျင့်သုံးမှာကို ၃ နှစ် စာ နှောင့်နှေးမှာမို့ အကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင် မကျင့်သုံးခင်က ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ဘယ်သူတွေ တပ်မတော်ကို အကောင်းမြင်ခဲ့ကြပါသလဲ။ ခု ချိန်မှာ မကောင်းဘူးလို့ ယူဆရင် အရင်က ပြည်သူတွေကို ငဲ့ညှာပြီး ဒီစနစ်ကို မကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကို ကျေးဇူးပြန်တင်လိုက်ပါ။10 January at 03:07 · LikeUnlike · 8 peopleSlip Knot ‎@ ဂွ တိုကိုယ့်နိုင်ငံ တပ်မတော် အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ စစ်သား လိုက်စုတာ မဟုတ်တာလုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတွက်လည်း ဘာမှ ရှက်စရာမလိုပါဘူး။ စစ်မှုမထမ်းမနေရ စနစ် ကျင့်သုံးပြီးချိန်မှာလဲ တပ်မတော်မှာ အမြဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ တပ်သားသစ်တွေ ဆက်လက်စုဆောင်းနေ...မှာပါပဲ။ စုဆောင်းရေး တပ်တွေ မဖျက်ပါဘူး။အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲစီမံခန့်ခွဲမှု တွေကို ပညာပေးလိုက်သလို ဖြစ်ပြီးတော့ လူထုအနေနဲ့ နားလည်သင့်သလောက် တော့ တပ်အကြောင်းကို နားလည်သွားကြမယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကို ဂွတို ထင်သလို ဆိုးကျိုး မဖြစ်လာပဲ စစ်သား တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ဘူး ဆိုတာနဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ နိုင်ငံအပေါ် အနစ်နာခံနေတာတွေကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သိရလို့ တပ်နဲ့ ပြည်သူ ပိုမိုကြည်ဖြူတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။@ May Myo Chitညစ်ညမ်းတဲ့ စာတွေကို အားမပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်မှာ ဘလော့မှာ လာပြီး ပြောနေတာကို ထုတ်ပြောဖို့ထက် လက်တလော ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း ပြောနေသူကိုပဲ တားသင့်ပါတယ်။ "ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော်ဆိုရင် စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ် မလိုဘူး" ဆိုတဲ့ အတွေးကတော့ ညံ့ဖျင်းလွန်းပါတယ်။ ဒီစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးက တပ်မတော်အားလုံးကို ပြည်သူနဲ့ အဆင်မပြေဘူး၊ ပြည်သူက မချစ်ဘူး ထင်နေလို့လား? ဖက်ဆစ်တွေကို တော်လှန်ချိန်တုန်းကရော တပ်ထဲဝင်နေတဲ့ မြန်မာယောင်္ကျား အရေအတွက်နဲ့ မဝင်တဲ့ မြန်မာ ယောင်္ကျား အရေအတွက် ဘယ်သူက ပိုများလဲ ဆိုတာ ပြန်လေ့လာကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီချိန်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးစီးတဲ့ တပ်မတော်က ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော် မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကို ကျင့်သုံးချင် ကျင့်သုံးရလိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့တာလား?အားလုံး သိထားဖို့ ပထမ တစ်ချက်က စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကို ကမ္ဘာမှာ ဘယ်နိုင်ငံတွေ သုံးနေလဲ သိချင်ရင် ကြည့်ပါhttp://1.bp.blogspot.com/_IFH7lcKKAtg/TSpLrUQbTFI/AAAAAAAAAbM/20NMEA0O3wA/s1600/Conscription.pngဒုတိယ တစ်ခုက မကောင်းမှုတွေ အများကြီး လုပ်နေတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်က သူ့အိမ်ကို ဘယ့်သူ့ကိုမှ အလည်မခေါ်ပါဘူး။ သူ့အိမ်အကြောင်း သိဖို့ မပြောပါနဲ့ အိမ်နားကပ်တဲ့လူကိုတောင် သဘောမကျပါဘူး။ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်ပြီး စနစ်ကျတဲ့ အိမ်တစ်ခုအတွက် ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ဧည့်သည်ပဲ လာကြည့်ကြည့် ထွေထွေထူးထူး ပြင်ဆင်ဖို့တောင် မလိုပါဘူး။ ဒီတော့ အားလုံးကို တပ်မတော်ထဲကို လာကြဖို့ တပ်မတော်သားအားလုံးက အမြဲဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် တပ်မတော်က ဘယ်လိုအိမ်လဲ ဆိုတာ သိလောက်ရောပေါ့။10 January at 03:07 · LikeUnlike · 8 peopleYumyum Noodle ‎(၁) ဆုပြည့်မေးထားတာကို နိုင်ငံခြားရောက် ပညာတက်ဗိုလ်ကြီးတွေ ချက်နဲ့လက်နဲ့ပြန်ရှင်းပြတာ မတွေ့ပါ့။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖတ်ကြည့်ချင်တာ . . တစ်ချို့ဆရာတွေ တစ်ယောက်ချင်း နာမည်တပ်ပြီး ပြန်ပြောပြတာတော့ တွေ့ပါရဲ့ . . ဥပမာ @ဆြာဆိုက်တို့ @ဂွတို တို့ . . မေးထားတဲ့ မန်ဒတယ်ရီ မစ်လစ်တရီ စားဗစ်အကြောင်းကတော့ ပြန်ဖြေနိုင်သင့်ပါတယ် ။10 January at 10:13 · LikeYumyum Noodle ‎(၂) အရင်က ဆေဗယ်လိုက်ဇေးရှင်းနားမလည်လို့ အဒ်ဒမင်စတေးရှင်း ဖော်မယ်မဖြစ် . . ကိုယ်ကျိုးကြည့် စစ်ဗိုလ်တွေအုပ်ချုပ်လို့ တိုင်းပြည် စုတ်ပြက်တာတော့ ထားပါ . . အခုအကိုတော် စစ်ဗိုလ်များ နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဆက်လက် ပါတ်သတ်ကြရမယ်ဆိုရင်တော့ အိပ်ကပ်ပါတဲ့ အိန်ကျီလေးတွေမဝယ်ပဲ အွန်လိုင်းတက်တာလျှော့ပြီး ယခင်လူများကို နမူနာယူကာ မိမိတို့မပြည့်မှီတာလေးတွေ ဖြည့်ထားကြ စေချင်ပါတယ် ။10 January at 10:14 · LikeYumyum Noodle ‎(၃) ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး စတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာ စစ်တပ်ဝန် မထမ်းမနေရစနစ် အရင်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ချင်တာ နဲ့ အဲဒီ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို တိုင်းသူပြည်သားအားလုံး ဝင်ဆန့်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ ဒုတိယပင်လုံ ဘယ်ဒင်းကလျှော်ကန်သင့်မြ...တ်လဲ မဆုံးဖြတ်တက်ဘူးဆိုရင်တော့ .. လွှတ်တော်ထဲမယ် ရှိနေမယ်. ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော ၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်သော တပ်မတော်မှပုဂိုလ်များ ကော်ဖီလေးသောက် မုန့်လေးစားပြီးသာ ပြန်ကြမှာဆိုတာ သိကြစေချင်ပါတယ် ။ အကိုတော်တို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့တော့ မငြင်းစေချင်ဘူးဗျာ . . ဘာလို့ဆို ဒီကအကိုတော် စစ်ဗိုလ်လေးများဟာလည်း တစ်ချိန်ချိန်မှာ အဲဒီနေရာတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကော်ဖီမကြိုက်သူပါလာမှာစိုးလို့ပါ ။စေတနာဖြင့် yumyum10 January at 10:15 · LikeUnlike ·2peopleSlip Knot ‎@ Yumyum Noodleကျနော် ပြောလိုက်ရင် တစ်ယောက်မှ ပြန်မပြောရဲပဲ ရှောင်ရှောင်သွားလို့ စိတ်ညစ်နေချိန်မှာ ပြန်အစ ဖော်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နံပါတ်အလိုက် ပြန်ညွန်းတာပေါ့။(၁) မ Supyae Sandar က "Mandatory Military service in Myanmar က military ser...viceaform of slavery ဖြစ်သွားနိုင် မနိုင်ပေါ့ရှင်" လို့ မေးထားပါ။ Mandatory Military service အကြောင်း မေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီမေးခွန်းကို စိတ်ဝင်စားသူဆိုတော့ အဲ့လိုပဲ ယူဆထားမှာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Mandatory Military service in Myanmar က military serviceaform of slavery ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ ဘာကြောင့်ယူဆရတာလဲ?? ဆိုတာလေးကို အရင် သိချင်ပါတယ်။ ဘယ်အချက် ဘယ်အချက်တွေကြောင့်ဆိုရင်တော့ တစ်ချက်ချင်း ပြန်ဖြေရှင်းဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။(၂) ဘာကို ဆိုလိုမှန်း နားမလည်ပါ။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် မြန်မာစာကို မြန်မာနားလည်အောင် ဘယ်သူ့မှ ထိခိုက်တာမပါပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နဲ့ ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့် ဘယ်လို အကျိုးတရားဖြစ်တယ် ဆိုတာ ပြန်ရေးပြပါ။(၃) ဒီမိုကရေစီနဲ့ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေနဲ့ ဘယ်လို ပက်သက်နေပါလဲ?? အပေါ်မှာ မေးထားတာကိုပြန်မေးရရင် ဒုတိယ ပင်လုံ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ?၊ အဲ့ဒီ project အတွက် ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ လုပ်နေကြပြီလဲ ? ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အောင်မြင်မှု ရနေပြီလဲ ? အဲ့ဒီ project ကို ဘယ် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေက ထောက်ခံပါသလဲ? ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ဘယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေက ထောက်ခံပါသလဲ? လူပေါင်း ဘယ်လောက်များများက စိတ်ဝင်စားနေပြီး အစိုးရကို ဘယ်လောက်များ ထိခိုက်နေပြီလဲ ? ပြောပြပေးပါ။စေတနာကို တုန့်ပြန်သောအားဖြင့်10 January at 10:38 · LikeUnlike ·9peopleဟမ်း လော့ ‎@Yumyum Noodle,@Anna Linnအထက်မှာ ကို Slip Knot ကတစ်ချက်ချင်းရှင်းလင်းတိကျစွာ ရှင်းပြထားခဲ့ပြီးသားပါ။မျက်စိရှန်းသွားလို့နေပါလိမ့်မယ်ပြန်ရှာဖတ်လိုက်ပါဦး :))))10 January at 10:41 · LikeUnlike ·3peopleMg Yan အင်း ကိုslip နဲ့မှ တည့်တည့်တိုးကျတားကိုး....း)10 January at 10:42 · LikeYumyum Noodle နံပါတ်(၁)ကို ဖြေပြီးပြီဆိုရင်တော့ .. ကျနော်ပြန်ရှာကြည့်ပါ့မယ် ။ နံပါတ်(၂)ကိုနားမလည်ရင်တော့ ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုဟမ်းလော့ကိုပဲ မေးလိုက်ပါ သူကျနော်.ကို အဲဒီကိစ္စအတွက်လင့်တစ်ခု ချပေးထားတယ်ဆိုတော့ ကျနော်ဘာပြောချင်တာလဲကိုဟမ်းလော့နားလည်ပါလိမ့်မယ် ။နံ...ပါတ်(၃) ဒီမိုကရေစီနဲ့ စစ်ဥပဒေ ပါတ်သတ်တယ် မပါတ်သတ်ဘူးဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ခြင်းအပေါ် ဒီစစ်ဥပဒေထုတ်ပြန်ရခြင်း နဲ့ ဒုတိယပင်လုံကို ယှဉ်တွဲဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အပေါ်ကွန်မန့်က အကိုတော် စစ်ဗိုလ်ကလေးကို ပြန်မေးပေးပါ ။ အကိုတို့ခြင်းနီးနီးကပ်ကပ်ဆိုတော့ အဆင်ပိုပြေမယ်ထင်လို့ပါ .. ပြီးတော့ကျနော်က ဖုန်းနဲ့တစ်ဆင့် အင်တာနက်သုံးနေရတာမို့လို့ သိပ်နှေးနေလို့ပါ10 January at 10:56 · LikeKhin Win စစ်သားအလုပ်ကလူသတ်ဖို့လေမသိဘူးလား။နင်တို့အော်နေသလိုဖြစ်မှာပေါ့ဟ။ရရင်ရ၊မရရင်ချဆိုတာလေ။သူတို့လဲပြောလို့မရလို့ချတာဖြစ်မယ်။:D10 January at 13:20 · LikeSupyae Sandar အမက ကြက်တွေအကြောင်းတော်တော်သိတာပဲနော်...ကိုယ်တိုင်ကကြက်လား..ကြက်ထိန်းလား ..တစ်ခုခုပဲ.. ဟဲ ဟဲKhin Win အိုင်ပီအောင်သင်းကနေ ယမ်ယမ် ခေါက်ဆွဲဖြစ်သွားတဲ့အကိုကြီးရေ့..လူဆိုတာသေတနေ့မွေးတနေ့ပါအကိုရာ။မလေးကနေကြောက်မနေပါနဲ့။တကယ်စစ်မှုထမ်းရမှာကပြည်တွင်းကဖိုက်တာတွေပါ။ဘယ်သူဆွဲဆွဲငြင်းခွင့်မရှိဘူးလေ။ဥပဒေကဥပဒေပဲ။မလိုက်နာချင်ရင်ကြောက်ရင် ပြန်မလာနဲ့သိလား။ဆုပြ...ည့်လေးကိုလဲထိန်းလိုက်ပါဦး။ညီမကမွှေးတဲ့မီးမဟုတ်ဘူးနော်။သေချာပြန်ဆန်းစစ်ပီးထိန်းထားလိုက်ပါ။အကိုထိန်းရင်တော့ငြိမ်မှာပါ။:)10 January at 15:28 · LikeMay Myo Chit slip knot သို....ရှင်တော်တော် ရယ်ရတာပဲ...ခုဒီမှာ ဆဲတဲ့သူကိုလည်း ကျမပြောခဲ့ပြီးပါပြီ..အဲ့လိုပဲ ကျော်ကြီးရေးထားတာ သဘောကျလွန်းလို. မေးကြည့်လိုက်မိတာပါ...ဘာလဲ ရှင်တို. အပြန်အလှန် မအေ နှမ ပေးပြီး ကျေနပ်လို.ဆဲနေတာနဲ. ကျမ လို မဆဲတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ကို လာရိုင်းစိုင်းနေတဲ့ ရှင်တို.စစ်သားက လုံးဝ မတူဘူးနော်...သူက ပိုယုတ်ညံ့တယ်..ရှင်တို. တားခဲ့ဖူးသလား...ငြိမ်နေခဲ့တယ်မလား....တန်ရာ တန်ရာလို. တော့ လာမပြောနဲ.နော်...ဒါဆို ရှင်တို. အခုရနေတာ လဲ တန်ရာ တန်ရာ ပဲ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်...10 January at 15:51 · LikeUnlike · 1 personMay Myo Chit slip knot သို. ရှင်ပြောတဲ့ ဥပမာ အရ ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်...စစ်မှု.မထမ်းမနေရ စနစ် ကျင့်သုံးကြတဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာ တချို.က ၂ နှစ် တချို.က ၃ နှစ် ..ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ဘာတွေများသင်ပေးနိုင်မလဲ..ဘာတွေ သိလာမလဲ..အတွင်းရေး သိလောက်အောင်တော့ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး...အိမ်တအိမ်ကို ခန အလည်သွားရုံနဲ. အဲ့ဒီ အိမ်တအိမ်အကြောင်း သိပြီလား..ဧည့်သည် လာခါနီး အပေါ်ယံ ရွှေမူံကြဲထားတဲ့ အိမ်ဖြစ်နေရင်ကော...10 January at 16:04 · LikeYumyum Noodle အဲ. ကလေးကလူကြီးထက်ညဏ်သာရင် လူကြီးတွေက ရှက်ကြမှာပဲနော . . အဟဲ . . . အဲ အမှန်က ကျနော်ဒီမှာလာကွန်မန့်မှာမဟုတ်ဘူး . . ပြည့်ပြောလို့လာရေးတာဗျ . . နောက် လှမ်းမခေါ်ကြပါနဲ့ဗျနော် ။ မတူတာညှိချင်ပေမယ်. မီးတွေပွင့်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ . . အဟဲ တပ်ထဲရောက်မှ မီးပွင့်ကြတာပေါ့ . . ;) ။ see ya . . all . . good luck !10 January at 16:07 · LikeUnlike · 1 personKyaw Gyi ကျွန်တော့်ကတော့ ဘယ်သူဘာဘယ်ဝါဘာလို့ တော့ဆဲတဲ့သူကို အမည်မတက်ချင်ပါဘူး မMay Myo Chit ပြောသလိုဆို ဆဲတဲ့သူတွေက သင်ထားတဲ့ပညာ . ပါလာတဲ့ ဦးနှောက် .လေ့လာဆည်းပူးထားတဲ့ အသိဥာဏ်တွေ နှိပ်ကျလို့မထိန်ချုပ်နိုင်လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် မMay Myo Chit ပြောတဲ့ ထဲမှာ လူသုံးယောက် အမည်ပါတယ် အချိုးချကြည့်လိုက်ပါ လက်တွေ ကျကျ လက်တွေ့ဆုတ်ကိုင်ပြနိုင်တာ မMay Myo Chitရဲ့ လူသုံးယောက်မှာ ဘယ်ဘက်က လူများနေတယ်ဆိုတာ 1/2 နော် :P10 January at 17:01 · LikeSlip Knot ‎@ ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ အလကားကေဘာကြောင့် မလိုအပ်သေးဘူးလို့ ယူဆရတာပါလဲ?? ဒီစနစ်ကို လက်တလော ကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းများစွာကရော ပြည်ပနဲ့ စစ်ဖြစ်နေတယ် ထင်ပါသလား။ စစ်အင်အားနဲ့ လက်နက်အင်အား မလုံလောက်ဘူးထင်ပါသလား။ မြန်မာနိုင်ငံထက် စစ်အင...်အားရော လက်နက်အင်အား အများကြီးသာတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ဒီစနစ်ကို သုံးနေပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ အလကားကေ အနေနဲ့ စစ်မှုမထမ်းမနေရ စနစ်က စစ်သားအရေအတွက် တိုးအောင်လုပ်တယ် လို့ ထင်နေတာကိုက ညံ့ဖျင်းမှုတစ်ခုပါ။ စစ်အင်အားတိုးစေချင်ရင် အမြဲတမ်းတပ်မတော်ကိုပဲ တိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဥပဒေ ပြဌာန်းဖို့မလိုပါဘူး။ ဒီဥပဒေက နိုင်ငံသားတိုင်း စစ်ပညာတတ်ထားဖို့၊ စစ်ရေးသတိရှိဖို့နဲ့၊ အရေးကြုံလာရင် မိမိအသက်နဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့ပါ။ လူအင်အားတိုးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။မေးချင်တာတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အင်အား ၅ သိန်းရှိတယ်လို့ ဘယ်မှာ ထုတ်ပြန်ထားလဲ သိပါရစေ..။ ပြီးတော့ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ "တိုင်းပြည်က တပ်မတော်အတွက်" ဖြစ်နေတယ် လို့ ယူဆပါသလား??။ ဒါဆိုရင် "တိုင်းပြည်က တပ်မတော်အတွက်" ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ကမ္ဘာမှာ အများကြီးရှိနေပြီပေါ့??''အခုက နိူင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမှ မလုပ်လို့'' လို့ ဆိုပြီး နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးမှာ မလုပ်ဘူးလို့ ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲ??"လူတော်တွေကို .. စစ်တပ်မှာ လူသတ်ဖို့" ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ သာဓက လေး သိချင်ပါတယ်။အဘီဆစ်လောက် မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေက နိုင်ငံအပေါ်မှာ စေတနာ မရှိဘူးလို့ ဘာကြောင့်ပြောရတာပါလဲ?? အဘီဆစ် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝနဲ့ လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်တွေ ငယ်စဉ် စစ်မြေပြင်တွေမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြပေးပါ။ဆန္ဒပြတဲ့ လူတွေကို အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ သူတို့တွေကသာ ရန်လိုပြီး ခဲနဲ့ပစ်တာတွေ၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာတာတွေ၊ လမ်းဘေးက ပြည်သူပိုင် အဆောက်အုံတွေ ဖျက်ဆီးတာတွေ လုပ်နေတာပါ။ သေသေချာချာ အသေးစိတ်သိအောင် စုံစမ်းကြည့်ပါအုံး။တပ်မတော်ရဲ့ အဓိက တာဝန်က နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့ပါ။ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူကြိုက်များစေချင်ရင် မင်းသား၊ မင်းသမီးပဲ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စစ်ဗိုလ်ဆိုတာ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် မှ မဟုတ်တာ။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ လျှပ်စစ်ရောင်းတာတွေ စတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေကို တစ်ယောက်တည်း တန်းစီပြောသွားပြီး မောသွားတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။ အပေါ်က ဗွီဒီယိုဖိုင်နဲ့ လမ်းကြောင်းလွဲသွားမှာဆိုးလို့ နောက်မှ ဆွေးနွေးတာပေါ့။ တစ်ခုတော့ မေးခဲ့ပါအုံးမယ်။ Sanction ကို မြန်မာ နိုင်ငံသား ဘယ်နှယောက်က ထောက်ခံပါသလဲ??10 January at 19:19 · LikeUnlike ·3peopleဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ အလကားကေ ကျွှန်တော်ကပဲဆော်ရီးပါ .. ကျွှန်တော်အထက်မှာပြောသွားတာတွေထဲမှာ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ကို မကွဲသလိုတော့ဖစ်သွားတယ် .. စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်အစိုးရကို .. စိတ်ထဲက သိနေပေမယ့် .. ဆွေးနွေးတိုင်း စစ်တပ်နဲ့အစိုးရ မကွဲသလိုဖစ်ဖစ်သွားလို့ပါ ..10 January at 19:20 · LikeUnlike ·2peopleSlip Knot ‎@ Yumyum Noodleဒါဆိုရင်လည်း နံပါတ် (၂) ကိစ္စကို ဟမ်းလော့နဲ့ပဲ ဆက်ဆွေးနွေးလိုက်ပါ။ (၁) နဲ့ (၃) မှာ ကျနော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေပေးပါအုံး။btw ထောက်ပြထားတဲ့ ကွန်းမှန့်တစ်ခု တက်လာတာနဲ့ အစိုးရိမ်လွန်ပြီး ပြာပြာသလဲ ဖုန်းထဲကနေ အင်တာနက် သိ...ပ်နှေးနေလို့ ဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းချက် ပေးဖို့မလိုပါဘူး။ အဆင်ပြေမှ ပြန်ရေးလည်းရပါတယ်။ စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ။ဒီစနစ် ကို "မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့မြင်တယ် " လို့ ဘာကြောင့် ပြောရတာလဲ သိချင်ပါတယ်။@ Justin Woodလိုအပ်လို့ လုပ်တယ်လို့ ကျနော် ပြောထားပြီးပါပြီး။ ဘာကြောင့်မလိုအပ်ဘူး ငြင်းနေရတာလဲ ဆိုတာ သိပါရစေ။ ကောင်းပြီ ဘယ်လို အကြောင်းတွေကြောင့် မလိုအပ်တာလဲ??၊ လက်တလော တပ်မတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်ဘာတွေလဲ ဆိုတာ သိထားလို့လား?? သိရင် ပြောပြပေးပါ။ဆရာဝန်က ဆရာဝန်အလုပ်လုပ်တယ်၊ စစ်သားက စစ်သားအလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာကို Justin Wood အနေနဲ့ တကယ် နားမလည်သေးလို့ပါ။ ဆရာဝန်က ဆေးအကြောင်းကို Justin Wood ထက် ပိုသိသလို စစ်သားက ကာကွယ်ရေးအကြောင်းကို Justin Wood ထက်ပိုသိတယ်ဆိုတာကို အသိဥာဏ်ချဲ့ကြည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် စစ်သားက ကာကွယ်ရေးအတွက် အလုပ်လုပ်တာကို ဘာမှနားမလည်တဲ့ ဘေးလူက ဘာအတွက် ဝေဖန်နေဖို့လိုသလဲ??@ Aung Layဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက် မေးခွန်းတွေကို ဗိုလ်ချုပ်တွေရှိတဲ့နေရာ သွားမေးတာ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဗိုလ်ချုပ် တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။@ Supyae Sandarသိပ်ပြီးဖြေချင်တယ် ဆိုတာထက် အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်သူတွေကို အသိတရားထည့်ပေးချင်နေတယ် ဆိုရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ အထက်မှာ ပြောထားသလိုပါပဲ စာလုံး ၁၀၀ မှာ တစ်လုံးလောက် သိသွားရင် အချိန်ကုန်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဘောင်ဘင်ခက်ပြီး ကိုယ်မသိတဲ့ သူများတွေ အကြောင်းကို သိလိုလိုနဲ့ မ Supyae Sandar လို note တစ်ခုအနေနဲ့ မရေးခဲ့ဖူးပါဘူး။ မှားနေတာတွေကိုပဲ ထောက်ပြတဲ့အဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော် မေးထားတာလေးတွေ ဘာကြောင့်မဖြေရတာလဲ??ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆွေးနွေးချိန်တွေမှာ"အမက ကြက်တွေအကြောင်းတော်တော်သိတာပဲနော်...ကိုယ်တိုင်ကကြက်လား..ကြက်ထိန်းလား ..တစ်ခုခုပဲ." ဆိုတဲ့ စကားလို သိမ်ဖျင်းတဲ့ စကားတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမဖျက်ပါနဲ့။ အဓိက အကြောင်းအရာနဲ့ လိုရင်းကို ဆွေးနွေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။တစ်ခု သတိထားဖို့ ပြောချင်တာက အပေါ်မှာ မ Supyae Sandar က ဥပဒေက တကယ်မဖြစ်သေးဘူး ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေက ဘာလုပ်မယ် ညာလုပ်မယ် ပြောတယ်လို့ရေးထားတယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်း ပြန်မဖြေရှင်းသေးဘူး။ ခု ''တပ်ထဲရောက်မှ မီးပွင့်ကြတာပေါ့ '' လို့ Yumyum Noodle က ပြောသွားတယ်။ ဒါ ပြောသင့်လား၊ ပြောသင့်လား?? သူပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ??@ May Myo Chitကျနော် ဆဲထားတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးလောက် မြင်ဖူးရင် ပြပေးပါ။စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ဆိုတာ တပ်မတော်အကြောင်း အတွင်းရေးတွေ သင်ပေးတဲ့ စနစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို နားလည်ပါ။ ၂ နှစ် ၃ နှစ်အတွင်း သင်ပေးတာတွေက မလုံလောက်ဘူးထင်ရင် ထပ်ပြီး တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ မ May Myo Chit ဘယ်နှနစ် နေချင်ပါသလဲ?? ၃ နှစ် လောက် အမှုထမ်းရမှာကို ခဏ အလည်သွားတာလို့ ဘာကြောင့်ထင်ရတာလဲ?? မ May Myo Chit ဆီကို ၃ နှစ် လာနေပြီး ခဏ ပါ လိုပြောရင် အဲ့ဒီ အသုံးအနှုံး မှန်တယ်လို့ ပြောနိုင်လား။10 January at 19:21 · LikeUnlike ·6peopleSlip Knot ပြောချင်တာလေးတွေလည်း (စဉ်းစဉ်းစားစား) ပြောကြပါ။ကိုယ်ပြောထားတာလေးတွေကိုလည်း (သိက္ခာရှိရှိ) တာဝန်ယူကြပါ။မေးထားတာလေးတွေကိုလည်း (အရှက်မရှိ) မရှောင်ပြေးကြပါနဲ့။10 January at 19:37 · LikeUnlike ·5peopleSlip Knot ‎@ Supyae Sandar နှင့် Yumyum Noodleစကားကို စဉ်းစဉ်းစားစားပြောဖို့နဲ့ ကိုယ်ပြောတာကို သိက္ခာရှိရှိတာဝန်ယူဖို့အပြင် ရှက်တတ်ရင်မရှောင်သွားဖို့ ကျနော် အထက်မှာ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီSupyae Sandar နှင့် Yumyum Noodle တို့ အဆိုပြုခဲ့တဲ့ အောက်က မေးခွန်း... နှစ်ခုကို ခုချိန်ထိ လုံးဝ အစ မပျိုးတာကတော့ မျက်နှာပြောင်တိုက်လွန်းသလို ဖြစ်နေပါတယ်။၁။ "Mandatory Military service in Myanmar က military serviceaform of slavery ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ " ဘာကြောင့် ယူဆ ရတာလဲ?? ဘယ်အထောက်အထားတွေကြောင့်လဲ??၂။ ဒုတိယ ပင်လုံ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ? အဲ့ဒီ project အတွက် ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ လုပ်နေကြပြီလဲ ? ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အောင်မြင်မှု ရနေပြီလဲ ? အဲ့ဒီ project ကို ဘယ် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေက ထောက်ခံပါသလဲ? ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ဘယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေက ထောက်ခံပါသလဲ? လူပေါင်း ဘယ်လောက်များများက စိတ်ဝင်စားနေပြီး အစိုးရကို ဘယ်လောက်များ ထိခိုက်နေပြီလဲ ?အဲ့ဒီနှစ်ခုကို မသိချင်ဟန်ဆောင်နေလို့ ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။Yumyum Noodle အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ"ဆုပြည့်က ကျနော်ကိုယ်တိုင်လေးစားတာဗျ ဘာလို့ဆို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ညဏ်ထက်တယ် ၊ အဆိုးအကောင်း ခွဲခြားတက်တယ်"ဆိုပြီး ဘုတ်ကိုကျီးမြှောက်၊ ကျီးကိုဘုတ်မြှောက်သလို ဆွေးနွေးချိန်မှာ ဘေးက မိန်းခလေး အကြောင်း အရှက်မဲ့ အသားလွတ်ချီးကျူးနေတာတွေ တော့ သိက္ခာရှိပြီး ဆွေးနွေးမှုကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။10 January at 23:33 · LikeUnlike ·2peopleSupyae Sandar ‎* Khin Winဆုပြည့်လေးကိုလဲထိန်းလိုက်ပါဦး။ညီမကမွှေးတဲ့မီးမဟုတ်ဘူးနော်။သေချာပြန်ဆန်းစစ်ပီးထိန်းထားလိုက်ပါ။အကိုထိန်းရင်တော့ငြိမ်မှာပါ။ ...... လို့ ဘယ်သူစပြောတာလဲဆိုတာကိုအကို မမြင်ပြန်ဘူးထင်တယ်နော်.......သိက္ခာရှိတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်လို့ အကိုပြောတဲ့ စကားကဘယ်လိုလေသံလေးတွေစွက်နေလဲဆိုတာကိုတော့ အကို့ကိုယ်ပဲ အကိုသိမှာပါ...ကဲ.. . သိက္ခာရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို အကိုပဲ စီနီယာအကျဆုံးဆိုတော့ အရင်ဆုံး ညွှန်ပေးလို့ရအောင် ပြန်ပြမယ်နော်..ကျွန်မဦးဆုံးရေးတဲ့ comment က ဒီဗီဒီယိုနဲ့သက်ဆိုင်တာကိုပဲရေးတာအဲ့ဒါကိုတုန့်ပြန်ကျတဲ့ reply လေးတွေကိုပေါ့နော်... သေချာပြန်ကြည့်ပါ..1.* Ko Aungဒေါ်စုပြည့် အပေါင်းအပါတွေကို နည်းနည်း ရှယ်ပေးလိုက်ပါအုံး အိပ်ပျော်နေမှာဆိုးလို့ ဟဲဟဲ ခုထဲ ကြိုတင် ဗီဇာတွေ ခိုလှုံခွင့်တွေ လျှောက်ထားလို့ ရအောင်ပါ ဟဲဟဲ *2.* Kyaw Gyiမုန့်ဆီကြော်လာ လာမယ်လေ... အဲဒီကျမှ မစုပြည့်ကိုကို ကို PhD တွေတက်ခိုင်းမနေနဲ့ဦးနော် ...ဂိမ်းထဲမှာတိုက်တိုင်း အပြင်မှာလက်တွေ့ စကေးပြန်ချမယ်ဆိုရင် Supyae Sandar ချစ်သူ့ကိုပဲစကေးတက်အောင်ကျင့်ခိုင်းပီးတော့ ဥပဒေပြဌာန်းပီးရင် လွှတ်လိုက်နော် လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝ မ၀စမ်းကြည့်မယ် စောင့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်မကို အဲ့လိုတွေ ကျွန်မရဲ့လူမှူရေးတွေကို ပြောနေခဲ့ပါတယ်..အဲ့ဒါကိုကျွန်မ တားခဲ့ပါသေးတယ်..ဆိုတာကိုလဲ ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်..*** Supyae Sandarအဲ..ကိုကျော်ကြီးရော ကိုအောင်လေးရော..သေချာလဲဖတ်ပါအုံး..ရေးထားတဲ့ comments နှစ်ခုလုံးကို...သေချာဖတ်ပြီးမှ သေချာပြန်ရေး..အိုကေလား...နေရင်းထိုင်းရင်းနဲ့ ပြည့် ကိုကို က ဘယ်ကပါလာတာတုန်းမဆီမဆိုင်တွေရှင်...အဟားးးး***Supyae Sandar Facts ကို ပြန်ပြောလေဗျာ.... ခွိခွိ***Supyae Sandar ခခခခခခခစ် ခခခခခခခခခခခခစ် ...သူတို့ကလဲ မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေပြောနေတယ်တော့....တစ်ချက်ခြင်းစီထောက်ပြထားတာကိုကျတော့တစ်ချက်ခြင်းစီ ပြန်မပြောပဲနဲ့..... တော်တော်လစ်တဲ့ အာမီမန်းတွေပဲ.. :)ကဲ.... သေချာဖတ်ကြည့်ပါအုံးနော်... အဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မမေးထားတာပြောထားတာ မေးခွန်းတွေကို မဖြေတဲ့ အပြင် အဲ့လိုတွေကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေ အပြင် ကျွန်မရဲ့ လူမှူရေးကိုပါဘယ်သူတွေက ပို့စ် နဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ စပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဆက်သာသက်သေပြရမယ်ဆိုရင် ...ကွန်မန့်က တစ်အားရှည်နေမှာဆိုးလို့ပါရှင်.... အဟဲ အဟဲ ...စီနီယာကြီးရေ... သိက္ခာရှိပြီး ဆွေးနွေးမှုကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဆိုတဲ့စကားကို သူများကိုမပြောခင်... ကိုယ့်ဂျူနီယာတွေကို အရင်ဆုံးပြောလိုက်ပါအုံးနော်.....ကဲ... အဲ့ဒါက လူမှူရေးဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုပြန်ဖြေရှင်းတာ...ဆက်ရေးလိုက်အုံးမယ်...အပေါ်က အကြောင်းအရာ Facts တွေကိုစောင့်အုံးကွယ်... :)10 January at 23:55 · LikeUnlike ·2peopleSupyae Sandar အခုမှ စိတ်ကူးနေတုန်း ရှိသေးတဲ့ .. ဒီ Mandatory Military service ဆိုတဲ့ အရေးဟာ ..ကျွန်မတို့ နိုင်ငံလိုမျိူး စ ရေ စ မယ့်... အဆင့်မျိူးမပြောပါအုံးရှင်..ဒီ Mandatory Military service ကို ကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် အခုချိန်အထိ ဒီအကြော...င်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ Debate တွေ ရှိနေကြတုန်းပါပဲ ..အဲ့လို Debate ဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းကလဲMandatory Military service ဟာ military serviceaform of slaveryဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး မြင်နေကြတဲ့ သူတွေနဲက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမြင်နေကြတဲ့ သူတွေ အုပ်စု နှစ်စု ကွဲနေကြလို့ပါ...အဲ့တော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ အနေနဲ့ကရော အခုမှ စဖြစ်ချင်မှ စဖြစ်မယ့်နိုင်ငံမျိူးအနေနဲ့ military serviceaform of slavery မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ယတိပြတ်ပြောလို့ရတဲ့ Reasonable Facts & suitable Subjectsတွေများရှိရင် တစ်ချက်ခြင်းစီပြောစေချင်ပါတယ်....နိုင်ငံသားတွေက ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်ချစ်လို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့စစ်တပ်ထဲဝင်တယ်ဆိုတာမျိူးပဲဖြစ်သင့်တယ်...certainly not the Government's choice....ဖိအားတစ်ခုကြောင့် အစိုးရက မ၀င်မနေရစစ်မှူမထမ်းမနေရဆိုတာကြောင့်...(5 ) နှစ်ဆိုတဲ့ ထောင်ဒဏ်ကိုကြောက်လို့ စစ်တပ်ထဲ ၀င်ရတာမျိူးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါက...a kind of Crime ..ပါပဲ..Forced military service is slavery .ပါပဲလို့ Napoleon က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်.. မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Patriotism ဆိုတဲ့ မျိူးချစ်စိတ်နဲ့both physically and mentally agree ..စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နှစ်ခြိုက်မှ ကြည်ဖြူမှ military serviceaform of slavery မဖြစ်မှာပါ..Byforce ကြောင့် သို့မဟုတ် Constitutionကြောင့် Service ရမယ်ဆိုရင်တော့ ..According to Napoleon, Forced military service is slavery...ပါပဲရှင်.......11 January at 00:32 · LikeUnlike ·4peopleSupyae Sandar ဒုတိယ ပင်လုံဆိုတာက ....အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ...ပြည်ထောင်စု အစစ်အမှန်နဲ့ .....တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်မယ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်.........ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ၂၁ ရာစုအမြင်၊ တန်ဖိ...ုးများနှင့် ကိုက်ညီသော ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံဟု သတ်မှတ် ခေါ်ဆိုထားပါတယ်...ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူအပါအဝင် ပါဝင်တဲ့ ပုဂ္ဂ္ဂိုလ်တွေပါ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရနိုင်တယ်... အဲဒီလို ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးတော့ အကျိုးဆက်က တယောက် အဖမ်းခံရလျှင် တထောင်ပျောက်သွားတယ်... မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သေသွားနိုင် ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို တစ်ချက်စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်...လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ အရာလက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လူမျိူးတွေနဲ့တော့ယှဉ်နေလို့မရဘူးလေ...အကိုတို့ရယ်...နော်...ဘာလုပ်လုပ်လှူပ်တာနဲ့ အဖမ်းခံရနိုင်သူတဲ့ သူဆိုတော့အများကြီးစဉ်းစားချင့်ချိန်နေရတာပေါ့ .... နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်...တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက် အာမခံသော ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူရေးကို နိုဝင်ဘာလ ၂ဝ ရက်က ဇိုမီးအမျိုးသား ကွန်ဂရက် ဥက္ကဋ္ဌ ပူကျင့်ရှင်းထန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ...တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လေ..နော်...အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင် ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်...* ကဲ... မေးတာတွေဖြေလိုက်ပြီ..... ထပ်လဲမမေးတော့ဘူးးထပ်လဲမမေးနဲ့တော့... စိတ်ပျက်စရာကြီးး...တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ပြောနေဆိုနေလိုက်ကြတာ... သီးခံတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာရှိတယ်လေ....နာအောင်ပြန်ပြောရင်ကျတော့ နာတတ်ကြတယ်...သူတစ်ပါးကိုကျတော့ရောနာအောင်ပြောနေလိုက်ကြတာ...အဲ့တော့ ... တာ့တာ ပါရှင်သာဓု ခေါ်မယ့်သူရှိလဲခေါ်ပေါ့နော်..၀မ်းသာလို့ လက်ခုပ်တီးကြမယ့်သူတွေရှိလဲ လက်ခုပ်တီးနေခဲ့ကြပေါ့.................11 January at 01:09 · LikeUnlike ·4peopleSlip Knot ‎@ Supyae Sandarစစ်မှုမထမ်းမနေရ စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ မဝင်ရင် သက်မှတ်ထားတဲ့ အပြစ်ဒဏ်တော့ ရှိတာပဲ။ ဒါကို ဘာအတွက် အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ပြောနေရတာလဲ??"military serviceaform of slavery မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့...ယတိပြတ်ပြောလို့ရတယ်" လို့ ဘယ်သူမှ မပြောထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Sunday at 18:32 အချိန်က "Mandatory Military service in Myanmar ကတော့ military serviceaform of slavery ဖြစ်မှာ ..ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပဲဗျိူ့...." လို့ မ Supyae Sandar က ယတိပြတ် ပြောထားပါတယ်။ ဒီတော့ အဲ့ဒီ ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေအတွက် ဘယ်လို Reasonable Facts & suitable Subjects ရှိလို့ ပြောရတာလဲ ဆိုတာ ပြန်ရှင်းပါအုံး။ တစ်ချက်ချင်း ပြောပြပေးပါ။11 January at 01:36 · LikeUnlike · 1 personSlip Knot ‎@ Supyae Sandarဒုတိယ ပင်လုံအကြောင်း ကျနော် မေးထားတာကဒုတိယ ပင်လုံ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ? အဲ့ဒီ project အတွက် ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ လုပ်နေကြပြီလဲ ? ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အောင်မြင်မှု ရနေပြီလဲ ? အဲ့ဒီ project ကို ဘယ် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေက ထောက်ခံပါ...သလဲ? ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ဘယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေက ထောက်ခံပါသလဲ? လူပေါင်း ဘယ်လောက်များများက စိတ်ဝင်စားနေပြီး အစိုးရကို ဘယ်လောက်များ ထိခိုက်နေပြီလဲ ?စတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ဖြေသွားတာတွေကhttp://ngffbm.wordpress.com/2010/11/25/%E1%81%82%E1%81%81-%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%B6-%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD/အဲ့ဒီ ပိုစ့်ထဲက အကြောင်းတွေပါ။မ Supyae Sandar ရေးခဲ့တဲ့ "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူအပါအဝင် ပါဝင်တဲ့ ပုဂ္ဂ္ဂိုလ်တွေပါ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရနိုင်တယ်... အဲဒီလို ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးတော့ အကျိုးဆက်က တယောက် အဖမ်းခံရလျှင် တထောင်ပျောက်သွားတယ်... မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သေသွားနိုင် ပါတယ် "ဆိုတဲ့ စကားက ကိုနေမျိုးဝေက မဇ္ဈိမကို ပြောခဲ့တဲ့ စကားပါ။မ Supyae Sandar ရေးခဲ့တဲ့ "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ၂၁ ရာစုအမြင်၊ တန်ဖိုးများနှင့် ကိုက်ညီသော ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုထားသည်"ဆိုတာကလည်း မဇ္ဈိမ ရဲ့ အာဘော်ပါ။အဲ့ဒီထက် အဆင့်တန်းရှိတဲ့ နည်းလမ်း မရှိတော့ဘူးလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို တာဝန်ယူဖို့အတွက် သူများ ပိုစ့်တစ်ခုကို copy & paste လာထည့်တာ သိပ်ပြီး ရှက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ လုပ်ရက်ပါ။ဘယ်မှာလဲ?? "အဲ့ဒီ project အတွက် ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ လုပ်နေကြပြီလဲ ?" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ...။ဘယ်မှာလဲ?? "ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အောင်မြင်မှု ရနေပြီလဲ ?" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ...။ဘယ်မှာလဲ?? " ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ဘယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေက ထောက်ခံပါသလဲ?" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ...။ဘယ်မှာလဲ ?? " လူပေါင်း ဘယ်လောက်များများက စိတ်ဝင်စားနေပြီး အစိုးရကို ဘယ်လောက်များ ထိခိုက်နေပြီလဲ ? " ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ...။11 January at 01:37 · LikeUnlike ·4peopleKo Aung ဒီ ဥပဒေ က အတည် ဖြစ်ဖို့ များတယ် ...ကျွန်တော် တို့ ပြည်သူ့ အချစ်တော် ဒေါ်စု သား ဘာလဲ နာမည် ထိန်လင်း ဆိုလား ဘာလား အမှု့ထမ်းမှာလားဗျို့....အဖိုး အမွေဆက်ခံမယ် နောက်ဆုံး မျိုးဆက်နော်...ဟီးဟီး ဗိုလ်ချုပ်ဆို့ မျိုးဆက်က မြေးတွေက ထက်တာ ....11 January at 10:39 · LikeSan Maung စစ်ခွေးတွေ ဟိုဂျပုအောင်လေး ငါ့ကိုကြောက်လို့ဘလော့ပြေးတဲ့အကောင် စကားရှည်မနေနဲ့ စစ်မှုထမ်းရလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး ငါတို့စစ်မှုထမ်းလဲ မတရားဆင့်ခေါ်လို့ထမ်းရမှာလေ မင်းတို့လို အချောင်စားရမလားစိတ်နဲ့ စစ်ထဲဝင်တာမှမဟုတ်တာ မင်းတို့စစ်တပ်က စစ်မှုထမ်းခိုင်းပြီး ခိုးဆိုးလုယက်လူသတ် မဒိမ်းကျင့်တွေသင်ပေးမှာလေ ဒါကြောင့်ငါလဲမင်းတို့ခွေးတပ်ကသင်ပေးတဲ့ပညာကို မင်းတို့ညီမတွေ အမတွေပေါ်မှာ ပလက်တီကယ်ဆင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်သိလား အော် မင်းတို့စစ်ခွေးအားလုံးကိုငါကျမ်းကျိန်ဖို့စိန်ခေါ်ထားတာ လချီရှိပြီနော် ခွေးမသားတွေ တကောင်မှမပေါ်လာပါလားကွ11 January at 11:03 · LikeUnlike · 1 personKyaw Gyi သတ္တ၀ါအားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ11 January at 11:04 · LikeUnlike · 1 personSan Maung အေးလေ အဲလိုမေတာပို့တဲ့ဘုန်းကြီးကိုသတ်တဲ့အဖွဲ့ကအကောင်ကများ ဒီစကားလာရေးမနေနဲ့11 January at 11:06 · LikeSan Maung ငါထပ်ပြောမယ် မြန်မာပြည်မှာ လူတန်းစားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ် တမျိုးက ပြည်သူ တမျိုးက အာဏာရှင်သန်းရွှေနဲ့သူ့နောက်မြှီးဆွဲတွေ ကြားလူတို့ခွထိုင်တို့တော့လာမလုပ်လေနဲ့11 January at 11:08 · LikeUnlike · 1 personKyaw Gyi ရော်ခတ်ပါလား ဗုဒွဘာသာမြန်မာလူမျိုး လူနေနေဘုန်းကြီးနေနေ သတ္တ၀ါတွေကျန်းမာချမ်းသာစေအောင် မေတ္တာပို့တာကို ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ တယ်လဲတက်လဲတက်နိုင်တဲ့မောင်တွေပဲ11 January at 11:09 · LikeSan Maung ကဲ မင်းအခုပြောတဲ့စကားကိုကျိန်လိုက်ရအောင်ကွာ ငါနိုင်ငံရေးသမားဟုတ်မဟုတ်ကိုပေါ့ကွာ11 January at 11:45 · LikeKo Aung အေ သွေးနဲ့ ဘီသွေး ပေါင်းရင် ဘာရလဲအေဘီ သွေးနဲ့ အိုသွေးအဲလို သွေးအမျိုးအစားလိုက်ပေါင်းရင် ဘာရလဲ စမ်းမောင် ပြောပြစမ်း11 January at 11:50 · LikeSan Maung မင်းစောက်ရူးပဲ မင်းကအေသွေးကွာ ဒါဆိုအေသွေးရှိတိုင်းမင်းအဖေလား ငါပြောတာ သွေးထဲကဒီအန်အေကိုစစ်တာ မင်းက အေဘီစီဒီတွေလာပြောနေတယ် မင်းတော့စောက်ရှက်ကိုကွဲမှာငါမြင်ရောင်နေတယ် မင်းဒီပို့တွေကိုမဖျက်ပဲထားထား သားအဖတော်တာကို သွေးအမျိုးအစားနဲ့ မင်းအလှည့်ကျမှစစ် မင်းအဖေတွေ တလှေကြီးထွက်လာမယ်11 January at 11:53 · LikeUnlike · 1 personKhin Win စမ်းမောင်နင်ငါ့ကိုအလုပ်ပေးပီးဒီမှာအီးလာပေါက်မနေနဲ့။နင့်note တွေထဲနင်ြ့ပန်ရှာဦး။,massage တွေကများလွန်းတော့ရှာရခတ်နေတယ်။နင့်ရဲ့ Aug, sepလောက်ကnote မှာရေးခဲ့တာ။နင်လဲရှာဦး။ငါ့ပဲမရှာခိုင်းနဲ့။11 January at 12:03 · LikeSan Maung ဘွားတော်ရေ ဘွားတော် မတ်စေ့ကို အနော်မျိုးကြီးရှာမတွေ့ပါ ဘွားတော်လူမှားနေတယ်ပြောတာလက်မခံလို့ ဘွားတော်ကိုရှာခိုင်းတာ ဘွားတော်နဲ့ဒီနေ့မှစကားစပြောဖြစ်ပါတယ်ဘွားတော်ရယ်11 January at 12:07 · LikeKhin Win နင်ကရှာမှမရှာပဲ။မတွေ့ဘူးလာအော်နေတယ်။နင်တောင်ငါ့ကိုပျောက်တာကြာလို့အေးဆေးပဲလားမေးဖူးပါတယ်မောင်ဂေါက်ငယ.်ရယ်။ငါရှာလို့ရရင်နင့်ကိုဘာလုပ်ရမလဲ။ဘယ်လောက်ကြေးလဲလောင်းမလား။နင်ကစွပ်စွဲဖို့ပဲတက်တယ်။ပြသနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုမှနင်မရှာချင်တာပဲ။နင်သာတကယ်ခေါင်းေ...ကာင်းရင်ငါဒလောက်လက်ညောင်းမှာမဟုတ်ဘ11 January at 12:12 · LikeSan Maung ဘွားတော်ကြီး နဲ့က ကျိန်လဲ အလုပ်မဖြစ်တော့ လောင်းမယ်ဗျာ ဘွားတော်ကြီးပြောတာ အနော်မဟုတ်တာ တရာရာခိုင်နှုန်းသေချာနေပြီဗျာ11 January at 12:14 · LikeSlip Knot ‎@ ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ အလကားကေဘက်စုံဆိုတဲ့ စကားကို နားလည်ရင် ဒီစကားမျိုး မထွက်လာသင့်ဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်အစိုးရကမှ သူတို့နိုင်ငံတွေကို စီးပွားရေးတစ်ခုတည်း တိုးတက်အောင်လုပ်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကာကွယ်ရေးတွေကို ချန်လှပ်မထားခဲ့ပါဘူး။ ...ချန်လှပ်ထားလို့လည်း မရပါဘူး။ ဒီတော့ စီးပွားရေး တစ်ခုတည်းကို စောက်ချပြီး တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ မိသားစု တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တာဝေးနဲ့အပစ်ခံရခံရ တာနီးနဲ့ အပစ်ခံရခံရ စစ်ပညာတတ်ထားတဲ့လူနဲ့ စစ်ပညာမတတ်ထားတဲ့လူနဲ့ နေရာယူပုံခြင်းတော့ကွာလိမ့်မယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါ။ တာဝေးတွေနဲ့ချည်းပစ်တော့မှာမို့ဆိုပြီး စစ်ပညာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်တာကတော့ ညံ့ဖျင်းမှုသက်သက်ပါပဲ။ ဒီတိုင်းဆိုရင် နိုင်ငံတိုင်မှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ ဖျက်ပြီးတော့ တာဝေးပစ်တွေပဲ ထိုင်လုပ်နေကြပါလိမ့်မယ်။ စစ်ကျောင်းတွေကို ဖျက်ပြီး တာဝေးပစ် စက်ရုံတွေပဲ လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ စစ်သားတိုင်းကို တခြား ဘာစစ်သင်တန်းမှမပေးပဲ တာဝေးသင်တန်းပဲ ပေးနေပါလိမ့်မယ်။ဒီဥပဒေ ပြထမ်းတာ ဘယ်နှနိုင်ငံလဲ သိချင်ရင်http://www.meepyatite.info/အဲ့ဒီနေရာမှာ ကျနော် ရေးထားတာ ကြာပါပြီ။ လေ့လာကြည့်ပါ။နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးဆိုတာ လမ်းတံတား ဆောက်လုပ်တာနဲ့ မပြီးဘူး၊ Banking System ကောင်းဖို့လိုတယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Banking System ကို အရင်ပြင်သင့်တယ် ဆိုတာတော့ လုံးဝ မှားပါတယ်။ ခုချိန်မှာ ပြည်သူတွေအတွက် Bank ထက် လမ်းတံတားက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ လမ်းတံတား မရှိလို့ အဆင်မပြေတဲ့ ပြည်သူတွေ အများကြီး ရှိနေပေမယ့် Bank မရှိလို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူ တစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး။ ဒါကို နားလည်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြို့ပြထက် ကျေးလက်ဒေသ တွေ ပိုများတယ် ဆိုတာ သိထားပါ။ ဖုန်းအလုံး အရေအတွက် များဖို့ထက် ဖုန်းပြောနိုင်တဲ့ လူအရေအတွက်များလာဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ မြို့တွေမှာ ဖုန်း ပိုင်ဆိုင်သူတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် ကျေးရွာတွေမှာ ဖုန်းမပြောဖူးတဲ့ လူတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ သူတို့တွေအတွက် Bank မလိုပါဘူး။ လမ်းကောင်းဖို့က ပထမ ပါ။လူတော်တွေကို စစ်တပ်မှာလူသတ်ဖို့ ဆိုပြီး ဦးခင်ညွန့် ကို ညွန်ပြတာနဲ့ ဦးခင်ညွန့်က အရပ်သားကနေ စစ်သားဖြစ်လာကြောင်း ပြောတာကိုတော့ နားမလည်ပါဘူး။အဘီဆစ် က လှေပေါ်မှာထိုင်ပြီး လှေအောက်က ထိုင်းပြည်သူတွေက ရေထဲကနေ လှေကို ဆွဲသွားတာကိုတော့ သတိမထားမိဘူးထင်တယ်။ နောက်တစ်ခု ရှပ်နီတွေကို အဘီဆစ် ဘယ်လို နှိမ်နှင်းခဲ့လဲ ဆိုတာရော ထည့်ပြောပါအုံး။ သွေးပုံးကြီးတွေ သွေးအိုင်ကြီးတွေကိုရော သတိမထားမိလိုက်ဘူးလား?? ဒါတွေက သူ့ကို အပြစ်တင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ကို မကောင်းတာ ပြောချင်ရင် မကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ရှာပြီး ကောင်းတာပြောချင်ရင် ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ရှာလို့ရတယ် ဆိုတာကို သိအောင် ပြောပြတာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်နဲ့ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက် ကို ထုတ်ဖော်နှိုင်းယှဉ်တာတော့ အစွန်းရောက်တာပဲ။ဆန္ဒပြသူတွေက ယဉ်ထိန်းရဲ ရုံးက မှန်တွေခွဲတာ၊ လမ်းဘေးက ကားတွေ ဖျက်ဆီးတာတွေ မမြင်လိုက်ဘူးထင်တယ်။ ဗွီဒီယိုဖိုင် ပြန်ရှာကြည့်ပါအုံး။နိုင်ငံရေး ဝင်လုပ်နေတာနဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် ဖြစ်တာနဲ့ ဆိုင်လို့လား ?? ကြိုက်အောင် ဝင်လုပ်နေတယ် ထင်လို့လား??Sanction နဲ့ ပက်သက်ပြီး မသိရင်တော့ ထပ်လေ့လာကြည့်ပါအုံး။11 January at 17:55 · LikeUnlike · 11 peopleSlip Knot ‎@ Naychi Mgmgပိုစ့်ကိုဖတ်ပါ၊ ဆွေးနွေးတာတွေကို ဖတ်ပါ။ အရည်အချင်းရှိပြီး စိတ်ပါရင် လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါ။ ဇတ်ရည်လည်ဖို့ဆိုတာ နောက်ဆုံး တစ်မျက်နှာတည်း ဖတ်လို့မရဘူး။ လူတစ်ယောက်အတွက် ရှေ့နေလိုက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကို မလာတာ ပိုကောင်း......ပါတယ်။ ရှေ့နေလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ အဆီအနှစ်မရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို ဘယ်သူမှ မဖတ်ချင်ဘူး။ ရှေ့နေ ငှားတဲ့ လူကိုလည်း ပြောလိုက်ပါ။ နောက်ထပ် စစ်ကူတွေ ထပ်မခေါ်ပါနဲ့တော့ လို့။ပထမ ကွန်းမန့်မှာ "ဟောင်တယ်လို့မပြောဘူး" ဆိုပြီး ဒုတိယ ကွန်းမန့်မှာ " ဟောင်နိုင်တာပဲ တတ်နိုင်တယ်" လို့ ရေးထားတာကိုတော့ အံသြစရာပဲ။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ စကားနှစ်မျိုးပြောတတ်တဲ့ မိန်းမ ဆိုတာ ဘယ်လိုမိန်းမ ဖြစ်မလဲဆိုတာ တော့ ကျနော် မခန့်မှန်းတတ်ဘူး။@ San Maungသိမ်ဖျင်းပြီး တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ စကားတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမဖျက်ဖို့ ကျနော် အကြိမ်ကြိမ်ဆုံးမဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားပြောရင် ခုချိန်ထိ ခါးအောက်ပိုင်းက မတတ်နိုင်သေးတာ စိတ်ပျက်စရာပဲ။ ကို San Maung ရဲ့ မိဘတွေကတော့ အဲ့လို သင်ပေးထားမယ် မထင်ပါဘူး။အရည်အချင်းရှိရင် အကြောင်းအရာ အထောက်အထားနဲ့ "ဆွေးနွေးပါ " " မဆဲပါနဲ့ " ၊ " သက်သေပြ " ၊ " မကျိန်ပါနဲ့ "... နိုင်ငံရေး အကြောင်းပြောတဲ့ စကားဝိုင်းမှာ "ကျိန်ပြမယ်" လို့ပြောတာကတော့ ဟသ အမြောက်ဆုံး စကားလုံးပဲ။" မြန်မာပြည်မှာ လူတန်းစားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်" ဆိုတော့ ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်နှမျိုး ရှိနေပါသလဲ?? ပြည်သူ ဆိုတဲ့ ဓိပ္ပါယ် က ဘာလဲ?? ပြည်သူ ဆိုတဲ့ထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ပါသလဲ ? ပြည်သူ ဘယ်နှမျိုးရှိပါသလဲ? ရှင်းပြပေးပါ။ ရှောင်ပြေးခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ အရင်လိုပဲ မရှောင်ပြေးဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။11 January at 18:00 · LikeUnlike · 12 peopleစိတ် ထား သန့်စင် Teresa Wood >>> အဘစိတ်ထားသန့်စင်နဲ့ ကျွန်တော်အမျိုးမတော်ပါဘူး...အဘရဲ့စာအုပ်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ဖတ်လို့ချီးကျူးလို့ ၀မ်းသာပါတယ်....အဘစိတ်ထားသန့်စင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုသဘောကျနှစ်သက်လို့ ဒီနာမည်လေးပေးထားတာပါ....ဒါပေမဲ့ အဘလိုစိတ်ဓါတ်မျိုးထားဖို့ကတော့တ...၀က်တောင်မှီဖို့ကြိုးစားနေရပါတယ်...အစ်မလိုပဲ ကျန်တဲ့သူတွေလဲအဲစာအုပ်ဖတ်မိရင် သဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်..ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါအုံး...အစ်မပြောတဲ့ကိစ္စကတော့ အမျိုးမတော်တဲ့အတွက် ပြောပေးလို့မရတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မTeresa Wood ...:)11 January at 18:47 · LikeUnlike · 1 personBayy Kyayy ကောင်းသဗျ ဒါမျိုးလေးလဲ ရှိဦးမှ ..........ဒါမှ ကိုယ့်အမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြမှာ.............မှန်တယ်နောင်ကြီး11 January at 22:26 · LikeUnlike ·2peoplePhyo Hylan Htut ‎@ Naychi Mgmg >> အပေါ်မှာလဲ အပေါစားကောမန့် နှစ်ခုရေးသွားတာတွေ့ မိလိုက်တယ်နော်... အခုလဲပြောပြန်ပြီဗျာ...အဲဒီအတွက် အတော်လေးကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်...။ ဒီလိုကောမန့်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ဘယ်လို သတ်မှတ်ပေးရမလဲ... Naychi Mgmg ရဲ့ ကောမန့်တွေ...က ဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်လဲ သဘောပေါက်မှာပါ...။ ဆွေးနွေးမှုမဟုတ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ.။ ပညာမဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်က ကို့ရဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေကို လူပုံမလည်မှာ အထိန်းအကွပ်မဲ့ ပြောနေတာနဲ့ တူမနေဘူးလား...။အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရေးရင်လဲ ကိုယ်တိုင်သေချာသိအောင်လုပ်ပါဗျာ....။ သူတောင်းစားခွက်ပျောက်တဲ့ ပုံစံမျိုး အော်ချင်ရာအော် ပြောချင်ရာပြောနေမယ် ဆိုရင်တော့ Naychi Mgmg ကို လူတွေဝိုင်းကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ် ဆိုတာ စေတနာနဲ့ သတိပေးပါရစေ..။ နောက်တစ်ခါ ကောမန့်လာရေးမယ်ဆိုရင် အပေါ်က ကောမန့်တွေထဲက ၅၀၀ လောက်ကို သုံးခေါက်လောက် နားလည်အောင်ဖတ်ပြီးမှ လာရေးပါ...။ ဟုတ်ပြီလား..???Wednesday at 16:30 · LikeUnlike ·2people2 people like this. · San Maung ဟိန်းသူရစစ်ခွေးရေ ငါ့ကိုယ်ငါ မျိုးချစ်လို့လဲမပြောမိပါလား ခွေးလေးရ ကျိန်တိုင်းမဖြစ်ဘူးထင်ရင်ကျိန်လိုက်လေကွာ အပြီလုပ်နဲ့သက်သေပြလိုက်ပေါ့ကွာ လေထွားတာကတော့ လူတိုင်းထွားတတ်တယ်ကွ မင်းတို့နဲ့ငြင်းရတာ အcချိန်ကုန်လို့ ကျိန်မယ်ပြောတာ နိုင်ငံတကာမှာတော့ သမတတွေ ကျမ်းကျိန်ကြတယ် မင်းလိုခွေးမသား အုပ်ကြားမြက်ပေါက် သန်းရွှေ-ဖင်ရပ်ဖို့ပဲသိတဲ့အကောင်ကဒါတွေသိလောက်တဲ့ညဏ်ရည်မှမရှိတာThursday at 04:55 · LikeUnlike · Slip Knot ‎@ San Maungနိုင်ငံတကာမှာ သမ္မတတွေ ကျန်းကျိန်ကြတာ ကို San Maung ခုမှ သိတယ်ထင်တယ်။ ဒီမှာ ရှိနေတဲ့လူတွေ အားလုံးသိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးနေရင်းတော့ ဘယ်သူမှ မကျိန်ပါဘူး။ ခု ဟာက သမ္မတရွေးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် San Maung ကျိန်နေတာ အရေအတ...ွက် တော့ တော်တော်များနေပြီ။(အဆင့်တန်းရှိရှိ) ဆွေးနွေးပါ - မဆဲပါနှင့်(ယုတ္တိရှိရှိ) သက်သေပြပါ - မကျိန်ပါနှင့်(မှန်မှန်ကန်ကန်) အထောက်အထားရှာပါ - မလောင်းပါနှင့်(သိက္ခာရှိရှိ) ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါ - ထွက်မပြေးပါနှင့်ဒါနဲ့ အပေါ်မှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဘာကြောင့်ခုထိ မဖြေသေးတာလဲ??Thursday at 14:21 · LikeUnlike ·5people5 people like this. · Mrdayvid Koko မသိတာလေးမေးမယ်။စစ်မှုထမ်းခြင်ဟာ တိုင်းတစ်ပါးက လာတိုက်မှ တိုင်းတစ်ပါးနဲ့စစ်ဖြစ်မှလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဆိုရင် ဒီစစ်မှုထမ်းခြင်းကိစ္စကို ကျင့်သုံးနေကြသော နိုင်ငံတွေမှာ သူတို့တွေမှာ အခြားတိုင်းတစ်ပါးတွေနဲ့ စစ်ဖြစ်နေလို့ စစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတာလား??တရုတ်မှာ စစ်ဖြစ်နေသလား ရုရှားမှာ စစ်ဖြစ်နေသလား စင်္ကာပူမှာ စစ်ဖြစ်နေသလား ထိုင်းမှာစစ်ဖြစ်နေသလား ထိုင်ဝမ်မှာစစ်ဖြစ်သနေသလား ကိုရီးယားမှာစစ်ဖြစ်နေသလား?Thursday at 17:22 · LikeUnlike ·2people · San Maung မစ်စတာဒေးဗစ်ကိုကို မသိလို့မေးတာလား သိရဲ့နဲ့မေးတာလား ကိုကိုကြီးမေးတဲ့နိုင်ငံတွေက စီးပွါးရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေနော် တဲပုတ်မှာနေပြီးစားစရာမရှိတဲ့အိမ်တခုက သူခိုးဝင်မှာကိုမပူဘူး ချမ်းသာတဲ့ အိမ်ကတော့ သူခိုးလူဆိုးမဝင်အောင်ကာကွယ်ရေးတွေ ငွေကုန်ခံလုပ်ရတယ်Thursday at 18:22 · LikeUnlike ·4people4 people like this. · Slip Knot ‎@ San Maungဆင်းရဲတဲ့ အိမ်က သူခိုး အခိုးခံရဖို့ ရာခိုင်နှုံးနည်းပေမယ့် ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေက ပြည်ပနဲ့ စစ်ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုံးမနည်းဘူး ဆိုတာ နားလည်ပါ။ Iraq က သိပ်ပြီး ချမ်းသာနေလို့ အမေရိကန်က တိုက်ခဲ့တာ လို့ San Maung ထင်နေပုံရတယ်။ Iraq ရဲ့ ခ...ျမ်းသာမှု အဆင့်က ကမ္ဘာမှာ ၆၂ ရှိတယ်။ သိချင်ရင်http://npngmyanmarp.blogspot.com/2010/11/blog-post_20.htmlအဲ့ဒီမှာကြည့်ပါ။Thursday at 19:50 · LikeUnlike ·4people4 people like this. · Mrdayvid Koko မောင်ဆန်းမောင်အနေနဲ့ သိထားရမှာက ဆင်းရဲလို့ မိမိနိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကို အဓိကထားမလုပ်တဲ့နိုင်ငံရယ်လို့မရှိပါဘူး။တစ်နည်းတစ်ဖုံတော့ မိမိနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုအစဉ် ကြိုးစားမြှင့်တင်နေကြတဲ့သူတွေကြည့်ပါပဲ။မောင်ဆန်းမောင်က မြန်မာနိုင်ငံကိုဆင်းရဲတ...ယ်လို့ဆိုချင်ပုံရတယ်။တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မဆင်းရဲပါဘူး။သဘာဝသယံဇာတပေါများတဲ့အတွက် နိုင်ငံတိုင်းမျက်စိကျနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်ပဲ မကြာခဏဆိုသလို အိမ်နီးနားချင်းအချို့နဲ့ပါ အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိလာတတ်တယ်။အဲလိုအချိန်ခါမှာ မိမိနိုင်ငံကာကွယ်ရေးက အင်မတန်နိမ့်ကျနေရင် တစ်ဖက်က စစ်ရေးအရတစ်မျိုး အမျိုးမျိုးခြယ်လှယ် ဟန့်တားချင်တဲ့ပုံစံပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။လက်တွေ့လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သာဓကတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လွယ်လွယ်ပြောရရင် အနိုင်ကျင့်လို့ရမှန်းသိရင် အနိုင်ကျင့်လာလိမ့်မယ်။အဲလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျမှ ကာကွယ်ရေးကိုမြှင့်တင်လို့မရပါဘူး။ဘယ်အရာမဆို တစ်ခဏအတွင်း ရရှိလာတာမရှိဘူး။အချိန် ငွေအား လူအား ပညာ ကြိုးစားမှု အားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးမှ ရတာပါ။ဆင်းရဲလို့ဆိုပြီး ကိုယ့်အိမ်ကို ခြံစည်းရိုးမခတ်ပဲ ဖြစ်သလိုထားမယ်ဆိုရင် အဲဒီအ်ိမ်မှာ လမ်းဘေးကဇရပ်ပမာ ၀င်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက်နေကြလိမ့်မယ်။လမ်ဘေးကခွေးဝဲစားကအစ ခွေးချေးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်သူမှအလေးနက်ထား ဆက်ဆံနေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲလိုအဖြစ်ကို ဒို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။သိက္ခာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်အောင် လုပ်ရမယ်။နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို ပြည်သူတွေတင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရသမ္မတကလုပ်လိမ့်မယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည် မြှင့်တင်နိုင်ဖို့က တပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလုပ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုပဲ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစက်ယန္တရားကြီးလည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့သူ့အပိုင်းလိုက် ကဏ္ဍအလိုက်ကို တတ်ညီလက်ညီနဲ့အတူတစ်ချိန်တည်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှ နိုင်ငံအတွက်တော်ကာကြမယ်။Thursday at 20:31 · LikeUnlike ·7people
စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်နှင့် ပက်သတ်ပြီး လူငယ်များ ဆွေးေ...
ဘာမှမထူးခြားတဲ့ (၂) လ
ထူးခြားမှုများနှင့် လျှပ်တစ်ပြက် ၂၀၁၀
နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စစ...
မြန်မာအစိုးရ ပဋိပက္ခကိုင်တွယ်ပုံကို ကုလနှင့် အင်ဒို တို့မှ ထောက်ခံချီးကျူးနေသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်စု မိတ္ထီလာ နှင့် ရခိုင် သို့ လုံးဝမသွားပဲ ထုံးစံအတိုင်း ငုတ်တုတ်ထိုင် အပြစ်တင်